မိထှေးရဲ့သမီး – My Blog
အိမျတှငျ မမ မရှိတုနျး အေးလှငျ သူ့ရညျးစား ငယျငယျ ကို စကားပွောခငျြ၍ဟု အကွောငျးပွကာ အိမျသို့ချေါလာခဲ့သညျ။ အခုတော့ သူအိပျသောအခနျးထဲတှငျ…… အေးလှငျက လီးကို အငွိမျမနဘေဲ ဝငျသလောကျ လီးတဝကျလောကျနဲ့ပဲ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျပေးနတေော့ ငယျငယျ က အောကျကနေ ကော့ကော့ပေးနသေညျ။ ဒီလို သှငျးလိုကျထုတျလိုကျနဲ့ လုပျနရေငျး အေးလှငျက သူ့နို့ကွီးနှဈလုံး ကို ခပျနာနာဆုပျကိုငျပွီး ကနျြတဲ့ လီးကို ဆောငျ့ပွီး အရှိနျဖွငျ့ သှငျးလိုကျသညျ။ “ ဗွဈ……ဗွဈ……ဒုတျ……” “ အမလေး……အမလေး……နာလိုကျတာ……အကိုရဲ့…နာလိုကျတာ……ကမြ ဟာလေးတော့ စုတျသှားပါပွီ……ကြှတျ…ကြှတျ……ကြှတျ……နာလိုကျတာနျော……” ငွီးလညျးငွီး ငယျငယျက သူ့ပေါငျလုံးကွီးတှကေို ကားနိုငျသလောကျ ကားပေးလိုကျပါတော့တယျ။ သူမရဲ့ ခေါငျးက လညျး ရမျးနတေော့ ဂုတျဝဲဆံပငျလေးက ဖှာလနျကွဲနပေါသညျ။
“ အကိုရယျ…ဒီလောကျကွမျးရသလား……ဒီလို ဆောငျ့ထိုးလိုကျတာ ငယျငယျ နာမယျဆိုတာ မသိဘူးလား……ဟငျး….ဟငျး…ကြှတျ…ကြှတျ…ကြှတျ……” ငယျငယျက သူ့လကျမောငျးကွီးကို လကျသီးဆုပျလေးဖွငျ့ ထုထုပွီးပွောသညျ။ “ နာတာက ခဏပါကှယျ……နောကျတော့ ကောငျးလာမှာပါ……” ပွောနရေငျး အေးလှငျက ဖွေးဖွေးခငျြးဆောငျ့လိုးပါတော့သညျ။ အခကျြ (၂၀) လောကျလိုးပွီးတဲ့အခါကတြော့ ငယျငယျ က နာတာတှကေိုမပွေီ့း မကျြလုံးလေးတှေ မှေးထားရငျးက ကော့ကော့ပေးပါတော့တယျ။ “ ပလှတျ…ဖှတျ…ဒုတျ…အား…ဗွဈ…ဇှတျ…ပလှတျ…ဗွဈ…အငျး…ဟငျး…ဟငျး…” အေးလှငျက နို့သီးလေးတှကေို တဈလုံးပွီးတဈလုံး စို့လိုကျ နှုတျခမျးကို စုပျယူလိုကျနဲ့ ခပျဖွေးဖွေးပဲ ဆောငျ့လိုးပေး သညျ။ “ ဗွဈ……ဗွဈ……ပလှတျ…ဖှတျ…ပွှတျ……” မကွာခငျမှာပငျ ငယျငယျက အရသာတှေ့၍လာသညျ။
အရသာတှလေ့ာပွီဆိုတော့ ဖွေးဖွေးခငျြးလိုးနသေော အေးလှငျ ကို အားမရနိုငျဖွဈလာသညျ။ “ ဗွဈ…ပလှတျ…ဖှတျ…ဖှတျ…ကောငျး…ကောငျးလိုကျတာ…အကိုရယျ…ဆောငျ့ပါတော့…နာနာသာ…ဆောငျ့ပါ…အ…ဟငျး…ဟငျး…” ငယျငယျက ဒီလိုမခြိမဆနျ့လသေံလေးနဲ့ ပွောလိုကျတော့ အေးလှငျက အကွိုကျတှသှေ့ားပွီး စိတျတိုငျးကဆြောငျ့လိုးပါ တော့သညျ။ “ ပလှတျ…ဒုတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…အား…အငျး…ဖှတျ…ဒုတျ…အား…ဟား…အမလေး…ကိုရယျ…ကမြနို့တှကေိုစို့ပေးပါလား…အငျး…ဟငျး…အား…အငျး…. …ကောငျးလိုကျတာနျော…” ငယျငယျကလညျး အပေးကောငျး အေးလှငျကလညျး အလိုးကောငျးနဲ့ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျ ဖွဈနကွေသညျ။ လီးကို ထုတျ လိုကျတိုငျး ငယျငယျ၏ စောကျပတျလေးက ကပျကပျပါလာကာ အေးလှငျအရသာတှလှေ့သညျ။
ငယျငယျ၏ ကိုယျလုံးလေး က ကဈြကဈြလဈလဈနှငျ့ ဘယျနရောကိုငျလိုကျ ကိုငျလိုကျ မာတငျးနတေော့ ကိုငျရတာလညျး ကောငျးနသေလို စောကျပတျ လေးကလညျး ကဉျြးကဉျြးလေးဆိုတော့ လိုးရတာ ကောငျးလှပွီး အရသာရှိလှသညျ။ ဆောငျ့လိုးလိုကျတိုငျး အောကျကနကေော့ကော့ပေးနတေော့ နှဈယောကျစလုံး အရသာတှနေ့ရေလသေညျ။ မကွာခငျ မှာပဲ ငယျငယျရဲ့ စောကျပတျထဲက အရညျကွညျတှကေ ရှဲသထကျ ရှဲလာပွီး မြားသထကျ မြားလာသညျ။ ငယျငယျ၏ မကျြ နှာလေးက ရှုံ့တှတှလေးဖွဈပွီး နှုတျခမျးလေးတှကေ တဆတျဆတျတုနျကာ လညျခြောငျးထဲက ဟပျကနဲ ဟပျကနဲ အသံ လေးတှေ စညျးခကျြကကြ ထှကျလာတော့ မကွာခငျ ငယျငယျပွီးတော့မညျကို သိလိုကျသညျ။ သူမ တငျမဟုတျ အေးလှငျ လညျး ပွီးခငျြလာသညျ။ “ ပလှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…အား…ကောငျးလိုကျတာ…အကိုရဲ့…အား…အငျး…” ငယျငယျ့ တကိုယျလုံး ရမျးခါပွီး ငွိမျကသြှားတဲ့ အခြိနျမှာပဲ အေးလှငျက လီးကို တအားထိုးစိုကျခလြိုကျပွီး သုတျရညျတှေ ကို ပနျးထညျ့လိုကျလတေော့သညျ။
ခဏကွာမှိနျးနပွေီးမှ အေးလှငျက ငယျငယျ ဘေးကို ခွပေဈလကျပဈလှဲခလြိုကျတော့ ငယျငယျက အေးလှငျကို အတငျးလှမျးဖကျလိုကျတော့သညျ။ အေးလှငျက ငယျငယျ့ကို ပါကငျဖှငျ့လိုကျရသညျဆိုသော အသိဖွငျ့ ကွညျနူးစှာ ပီတိတှဖွောလြှကျ ငယျငယျ၏ ကိုယျလုံး လေးကို သူ့ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးကာ မွတျမွတျနိုးနိုးလေး နမျးလိုကျတော့သညျ။ “ ကောငျးရဲ့လား……ငယျငယျ…အားရတယျနျော…” ငယျငယျက ရှကျကိုးရှကျကနျးလေးဖွငျ့ သူမ မကျြနှာလေးကို အေးလှငျ၏ ရငျခှငျထဲ ဝှကျ၍ ထားလိုကျသညျ။ “ ပွောပါ ငယျငယျရဲ့…အကို လိုးတာ ကောငျးရဲ့လား…ငယျငယျ အားရရဲ့လား…” “ ရှကျစရာကွီး အကိုရယျ…ငယျငယျ မပွောပါရစနေဲ့…” “ ဟငျ့အငျး……ပွောရမယျ…” “ အကိုကလဲ…” “ ပွောလကှော…” “ ဟှနျး…ဒီလောကျသိခငျြကွားခငျြနရေငျလညျး ပွောပွမယျ…ကောငျးတယျ…သိပျကောငျးတယျ…အကို့ လီးကွီးက ငယျငယျ့ စောကျပတျထဲတငျမဟုတျဘူး…အူထဲ အသဲထဲတောငျ ဝငျတယျလို့ထငျရတယျ…ကိုငျး…ကနြေပျပွီလား…” အေးလှငျက ခေါငျးငွိမျ့ပွပွီး ငယျငယျ၏ နဖူးလေးကို နမျးလိုကျသညျ။
ပွီးတော့ သူ့လကျတှကေ ငယျငယျ၏ နို့နှဈလုံးကို ဆော့ကစား၍ နသေညျ။ အေးလှငျ၏ လီးကွီးက တဖွေးဖွေး ပွနျ၍မာလာသညျ။ “ ငယျငယျ…အကို့ လီးကို စုပျပေးပါလား…” “ ဟာ…ကွာ…” ကွောကျကွောကျရှံ့ရှံ့လေး ပွောရငျးက လီးကွီးကို ငယျငယျ လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ။ သူမ ကွညျ့လိုကျကာမှ လီးကွီးက ဆတျကနဲ အထောငျနှငျ့ကွုံသှားသညျ။ ငယျငယျ ကွကျသီးထသှားသညျ။ “ ထကှာ…ငယျငယျ ကလဲ…” “ ဟာကွာ…အကို ကလဲ…” မထခငျြ ထခငျြ ပုံစံမြိုးလေးနှငျ့ ငယျငယျက အေးလှငျ လှဲနရောဘေးတှငျ ထိုငျလိုကျပွီး ခွရေငျးမှ သူမ၏ ထဘီကို လှမျး ဆှဲကာ အေးလှငျ လီးကို ပေါငျခွံတှပေါမကနျြအောငျ သုတျပေးသညျ။ ထိုသို့ ငယျငယျက သုတျပေးနစေဉျတှငျ အေးလှငျ၏ လကျက ငယျငယျ၏ နို့နှဈလုံးကို လှမျးဆှဲပွီး ဆုပျနယျပေးသညျ။ နို့သီးနီနီလေးတှကေို ခပြေေးသညျ။
ငယျငယျကလညျး လီး ကို လကျနဲ့ကိုငျပွီး သုတျပေးနတေော့ လီးက မာသထကျ မာလာလသေညျ။ ငယျငယျကတော့ ပကြေံနတောတှကေို သုတျပွီးသှားပမေယျ့ အိပျယာပျေါမှာ လကျလေးတဖကျထောကျထိုငျပွီး ထောငျ ထနသေော လီးကွီးကို စိုကျပွီးကွညျ့နသေညျ။ ပွီးမှ တဖွေးဖွေးငုံ့သှားပွီး စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပုံဖွငျ့ ဟငျးကနဲ သကျပွငျးခြ ကာ လီးထိပျကွီးကို နမျးလိုကျပွီး နှုတျခမျးဖွငျ့ စုပျလိုကျသညျ။ အေးလှငျ ဆတျကနဲ ကော့တကျသှားသညျ။ ငယျငယျက ထောငျမတျနသေော လီးကွီးကို လကျလေးတဖကျဖွငျ့ကိုငျပွီး လီးထိပျဖူးကွီးကိုသာ တပွှတျပွှတျ စုပျပေးနေ သညျ။ အေးလှငျ အရသာတှကေ့ာ ဇိမျရှိနသေညျ။ အေးလှငျက ငယျငယျ့အား သူ့လီးတဈခြောငျးလုံးကို ပါးစပျထဲသှငျးပွီး စုပျ ခိုငျးမယျကွံလိုကျပမေယျ့ ငယျငယျ လို အပြိုစငျလေးတဈယောကျက ဒီလောကျလုပျပေးရငျ တျောလောကျပါပွီဟု သူ့စိတျကို သူ ဖွသေိမျ့သညျ။
ငယျငယျကတော့ လီးထိပျဖူးကွီးကို စုပျလိုကျ ငုံလိုကျ နမျးလိုကျဖွငျ့ စိတျပါလကျပါ လုပျနသေညျ။ လီးကွီးက အကွော အပွိုငျးပွိုငျးထကာ မာသထကျ မာလာရုံမြှမက ထိပျဖူးကွီးကလညျး မတရားကွီး ဖေါငျးတငျး၍ ကားလာသညျ။ မကွာခငျမှာပဲ အေးလှငျ တဈယောကျ ပွီးခငျြစိတျတှပေေါကျလာသညျ။ “ ငယျငယျ…အကိုပွီးခငျြလာပွီ…တျောတော့ကှာ…” ငယျငယျက ခကျြခငျြးလီးကို ပါးစပျထဲမှ ဆှဲထုတျပဈလိုကျသညျ။ ဒါပမေယျ့ မကနြေပျပုံဖွငျ့ မခငျြ့မရဲလေး ကွညျ့၍ နေ သေးသညျ။ “ ငယျ…အပျေါကနလေုပျပေးပါလား…” “ အကိုကလဲကှာ…ငယျ မှ မလုပျတတျတာ…ဟာ” “ ငယျကလဲကှာ…အကိုပွောပွမှာပေါ့…အကို့ပျေါခှတကျလိုကျပွီး ဖငျကိုကွှပွီး…တဖွေးဖွေးသှငျးယူပေါ့…” “ ရှကျစရာကွီး အကိုရယျ…” “ ငယျကလဲကှာ…ကို့ကိုမခဈြဖူးလား…” ငယျငယျ မကျြနှာပကျြသှားသညျ။ ပွီးမှ… ငယျငယျက ကပြာကသီထပွီး အေးလှငျကို ခှတကျလိုကျသညျ။
သူမ၏ လကျတဖကျက လီးကွီးကို လှမျး၍ဆုပျလိုကျပွီး ဖငျကွီးကိုကွှကာ လီးထိပျကို စောကျပတျဝတှငျတေ့၍ တဖွေးဖွေးခငျြး ဖငျကွီးကို ဖိခသြညျ။ ဒီလောကျလေးပွောလိုကျရုံဖွငျ့ ကကြနြနလုပျတတျနသေော ငယျငယျ့ကို ကြေးဇူးတငျ ကနြေပျနမေိသညျ။ ငယျငယျ၏ စောကျခေါငျးထဲကို ဖွေးဖွေးခငျြးတိုးဝငျသှားသော လီးကွီး၏ အတှကွေ့ောငျ့ ငယျငယျ၏ စောကျခေါငျးထဲ တှငျလညျး အရညျတှရှေဲနဈနပွေီကို သိလိုကျရသညျ။ လီးကွီးတဆုံးဝငျသှားသညျနှငျ့ ငယျငယျက အေးလှငျ၏ ရငျဘတျကွီး ပျေါ လကျနှဈဖကျတငျထောကျရငျး ဖငျကွီးကို ကွှကွှပွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးသညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…ဇှတျ…ပလှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…ဖှတျ…အငျး…ဟငျး…ဟငျး…အ…ကွီး…ကွီးပဲ…ဟငျး…ဗွဈ…ဇှတျ…ဇှတျ…” အစက တဈခကျြခွငျးဆောငျ့နသေော ငယျငယျ၏ ဆောငျ့အားက တဖွေးဖွေးမွငျ့လာသညျ။
ဆောငျ့အားက ပွငျးလာ သျောလညျး ဆကျတိုကျ သှကျသှကျကွီးဆောငျ့တာမြိုး မဟုတျပေ။ အရသာခံကာ တဈခကျြခွငျး လေးလေးမှနျမှနျ ဆောငျ့၍ ငယျငယျက လိုးပေးသညျ။ ဒါကွောငျ့ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ အကွိုကျခွငျးမတူသော မိနျးမမြားအား ဘယျလိုဆောငျ့တာကွိုကျသလဲ သိခငျြ ရငျ သူတို့ကို အပျေါကတငျပေးလိုကျလြှငျ သူတို့အကွိုကျဆောငျ့တာကို သိရသညျ ဟူသော စကားမှနျကွောငျး အေးလှငျ သတိပွုမိလိုကျသညျ။ အခု ငယျငယျ အပျေါမှတကျ၍ ဆောငျ့နပေုံကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ငယျငယျက ဒရစပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့တာမြိုးကို မကွိုကျ။ တဈခကျြခွငျး လေးလေးမှနျမှနျ ဆောငျ့တာကွိုကျကွောငျး သိလိုကျရသညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…ဇှတျ…ပွှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…ဇှတျ…” “ အကို…ငယျ့ နို့တှေ ဆှဲပေးအုံး…” နို့အကိုငျခံရငျး အလိုးခံခငျြကွတာ မိနျးမတိုငျး၏ ဆန်ဒပငျဖွဈသညျ။ ငယျငယျပွောသညျ့အတိုငျး အေးလှငျက သူမ၏ နို့နှဈ လုံးကို စုံကိုငျ၍ ဆုပျနယျပေးသညျ။
“ ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ…ပလှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ဟငျး…ကောငျးလိုကျတာ…အကိုရယျ…ဟငျး…ဟငျး…အငျး…” “ ငယျ…ကောငျးလိုကျတာ…ငယျရာ…” အေးလှငျကလညျး ငယျငယျ ဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျး အောကျကနေ၍ သူ့လီးကွီးကို ကော့ကော့တငျပွီး ပွနျဆောငျ့ပေး သညျ။ အပျေါမှ လိုးရငျးက ငယျငယျက သူ့ဖငျကွီးကို တခကျြတခကျြ ဇကောဝိုငျး လှညျ့လှညျ့ပေးသညျ။ ကောငျးလှနျးသဖွငျ့ အေးလှငျက ငယျငယျ့ကို ကြေးဇူးတငျမိရုံသာမက ခဈြလညျး ပိုခဈြသှားရသညျ။ မကွာခငျမှာပငျ အေးလှငျ၏ လီးအရငျးက ပူလာပွီး ပွီးခငျြလာသဖွငျ့ အောကျမှနေ၍ အားရပါးရ ကော့ကော့ ဆောငျ့ လိုကျပွီး လီးကွီးထိပျမှ သုတျရညျတှေ ပနျးထုတျပဈလိုကျသညျ။
“ ဖှတျ…ပလှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဒုတျ…ဒုတျ…ဖှတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…အား…အား…ငယျ…ငယျ…အား…ဟား…အငျး…” မပွီးသေးသော ငယျငယျက မကျြလုံးနှဈလုံးကို စုံမှိတျပွီး အောကျနှုတျခမျးလေးကို ပွတျလုမတတျကိုကျကာ အံကွိတျပွီး အားရပါးရ ဆောငျ့ ဆောငျ့လိုးသညျ။ “ ဗွဈ…ပွှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…ဇှတျ…ဖှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဖှတျ…ဗွဈ…အား…ဟား…ကောငျး…ကောငျးလိုကျတာ…ကိုရယျ…အား…ဟား…အငျ့…ဗွဈ…ပွှတျ …အား…ခဈြ…တယျ…ကိုရယျ…ခဈြ…ခဈြ…အ…အငျ့…အငျ့…ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ …ဗွဈ…အား…ဟား…ရှီး…အငျး…ဟငျး…ဟငျး…” အခကျြနှဈဆယျလောကျ အပွငျးအထနျဆောငျ့ပွီးတော့ ငယျငယျ ခမြာ ‘ဟငျး’ ကနဲဖွဈကာ စောကျပတျဝကို လီးအရငျး မှာတိုး၍ ဖိကပျလိုကျပွီး အေးလှငျ၏ ရငျဘတျပျေါသို့ ပုံရကျသားလေး ကသြှားလသေညျ။
အေးလှငျကတော့ ငယျငယျအား ပါကငျဖှငျ့ပှဲတှငျ အားရပါးရ လိုးလိုကျရသဖွငျ့ အကနြေပျကွီးကနြေပျကာ ငယျငယျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို အတငျးဆှဲဖကျလိုကျပါတော့သညျ။ အမှနျတော့ ငယျငယျမှာ အရငျရညျးစား ထှနျးမောငျနှငျ့တုနျးက (၂)နှဈ တောငျဖွဈခဲ့ကွပွီး ကလေးပငျ ဖကျြခခြဲ့ရသညျကို ဒီမွို့သို့ပွောငျးလာတာ မကွာသေးသော ထှနျးလှငျ တဈယောကျ မသိရှာ ပါပေ။ အေးလှငျ ဒီမျောလမွိုငျမွို့သို့ရောကျတာ (၅)လရှိသှားပွီဖွဈသညျ။ ရောကျရခွငျးအကွောငျးရငျးကလညျး မမကွူကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ အေးလှငျနှငျ့ ကွူကွူမတေို့က မောငျနှမတှဖွေဈသညျ။
ဒါပမေယျ့ အရငျးတှေ မဟုတျကွပေ။ အေးလှငျ၏ ဖခငျနှငျ့ ကွူကွူမေ၏ မိခငျတို့ မုဆိုးဖိုနှငျ့ မုဆိုးမ ညားကွတော့ သူတို့နှဈယောကျ မောငျနှမဖွဈသှားကွရခွငျးဖွဈသညျ။ ဒီတုနျးက အေးလှငျက (၇)နှဈသား၊ ကွူကွူမကေ (၁၃)နှဈ သမီးဖွဈသညျ။ အခုအေးလှငျက အသကျ(၁၈)နှဈရှိပွီဖွဈပွီး ကွူကွူမကေ အသကျ(၂၄)နှဈ ရှိပွီဖွဈသညျ။ သူတို့ဇာတိမွို့က ဟင်ျသာတမွို့ကဖွဈသညျ။ သူတို့၏ မိခငျရော ဖခငျပါ အခုမရှိကွတော့ပေ။ ကှယျလှနျသှားခဲ့ကွပွီဖွဈသညျ။ ကွူကွူမကေ ရနျကုနျရှိ ကုမ်ပဏီတဈခုတှငျ အလုပျဝငျလုပျနပွေီး ကွူကွူမမှော အတျောလေးလှပသဖွငျ့ ကုမ်ပဏီမှ လူကွီးတဈယောကျနှငျ့ ညှိခဲ့သညျ။
ထိုအခါ ကွူကွူမကေို အလုပျမှထှကျခိုငျးပွီး မျောလမွိုငျမွို့တှငျ အိမျဝယျ၍ လာထားခွငျး ဖွဈသညျ။ မျောလမွိုငျမွို့တှငျက သူတို့ ကုမ်ပဏီ၏ စီမံခကျြလုပျငနျးရှိလတေော့ ဦးဇျောထှနျးဟုချေါသော ကွူကွူမေ၏ လူကွီးက တဈလတဈခါ ရောကျလာလရှေိ့တတျလသေညျ။ ဦးဇျောထှနျးက ကွူကွူမတေို့မောငျနှမကို ဘာမှလိုလသေေးမရှိအောငျ ထားပေးသညျ။ မျောလမွိုငျမှ အိမျကို ဝယျတာ ပငျ ကွူကွူမေ၏ နာမညျနှငျ့ ဝယျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့ လိုအပျခကျြကတော့ ကွူကွူမထေံတှငျရှိနသေညျ။ သူမက အခုမှ အသကျ(၂၄)နှဈပဲ ရှိသေးသညျ။ သှေးသားက အဆူဖွိုးဆုံးအရှယျ။ ဒါပမေယျ့ ဦးဇျောထှနျးက တဈလမှ တဈခေါကျ လောကျသာ သူမထံ ရောကျလာသညျ။ ရောကျလာတော့လညျး သုံးရကျလောကျပဲနပွေီး ပွနျသှားသညျ။ ဒီတော့ ကွူကွူမေ တဈယောကျ သှေးသားဆန်ဒမြား အားရကနြေပျမှုမရှိပေ။ အခုလညျး ည (၁၁)နာရီထိုးနပွေီ။
ကွူကွူမေ အိပျလို့မပြျောသေး။ ခံရခကျသောဝဒေနာကို တနုံ့နုံ့ခံစားနရေသညျ။ မထူး ပါဘူး။ အိပျမပြျောတဲ့အတူတူ ဝတ်ထုဖတျရငျကောငျးမညျဟု စဉျးစားပွီး အိပျယာပျေါမှထ၍ ဝတ်ထုစာအုပျကိုရှာသညျ။ မတှေ့။ ည နကေ အေးလှငျမြား ယူသှားသလား မသိဘူးဟုတှေးမိပွီး အေးလှငျ အခနျးထဲသို့ ဝတ်ထုစာအုပျသှားရှာရနျ ထှကျလာခဲ့သညျ။ အေးလှငျ၏ အိပျခနျးတံခါးကို ဖှငျ့လိုကျတော့ အေးလှငျက အိပျယာပျေါတှငျ ပကျလကျကွီး အိပျပြျောနသေညျကို လှမျး၍ တှေ့ လိုကျရသညျ။ ကွူကွူမေ အိပျခနျးထဲသို့ဆကျ၍ ဝငျလာပွီး ဟိုကွညျ့ ဒီကွညျ့ဖွငျ့ ဝတ်ထုစာအုပျကိုရှာသညျ။ “ အို…” ကွူကွူမေ မကျြလုံးလေးမြား ဝိုငျးသှားသညျ။ အေးလှငျ၏ ခေါငျးအုံးဘေးတှငျ သူမ၏ စာအုပျကို လှမျးတှလေို့ကျရသညျ သာမက အေးလှငျ၏ခါးမှ ပုဆိုးက ပွကြေ၍ ပစ်စညျးကွီးက အတိုငျးသားပျေါနသေညျကိုပါ တှလေို့ကျရသညျ။
ကွူကွူမေ တဈယောကျ အေးလှငျ အိပျနသေော ကုတငျဘေးသို့ တိုးကပျသှားသညျ။ ခေါငျးအုံးဘေးမှ စာအုပျကို လှမျး၍ မယူဖွဈသေး ဘဲ အေးလှငျ၏ ပစ်စညျးကွီးကို ငုံ့၍ ကွညျနမေိသညျ။ သူတို့ မောငျနှမ နှဈယောကျစလုံး မီးမှိတျ၍ မအိပျတတျ။ အခနျးထဲတှငျ နှဈပမေီးခြောငျးက ထိနျလငျးနတေော့ မွငျကှငျး တှေ အားလုံးက ရှငျးလငျးနသေညျ။ မဲနကျလုံးတဈနသေော အုကွီးပျေါတှငျ စငျးစငျးကွီးဖွဈနသေော လီးတနျကွီးက နညျး နညျးနောနောကွီး မဟုတျ။ သာမနျအနအေထားမှာပငျ အသဲယားစရာကွီး ဖွဈနလေသေညျ။ နဂိုကမှ စိတျတှထေနသေော ကွူကွူမေ တဈယောကျ သတိလကျလှတျဖွဈသှားကာ အေးလှငျ၏ လီးတနျကွီးကို သူမ၏ လကျလေးတဈဖကျနှငျ့ တုနျတုနျ ယငျယငျလေး အသာမ၍ ကိုငျလိုကျမိသညျ။ အမှနျတော့ ကုတငျနားသို့ ကွူကွူမေ တိုးကပျလာကတညျးက အေးလှငျ နိုးနခေဲ့တာဖွဈသညျ။
ဒါပမေယျ့ မကျြလုံးကို မ ဖှငျ့ဘဲ အသကျကိုမှနျမှနျရှုကာ အိပျခငျြယောငျဆောငျနေ ခဲ့ခွငျးဖွဈလသေညျ။ လီးကွီးက ကွူကွူမေ၏ လကျထဲရောကျ သညျနှငျ့ ထောငျးကနဲ ထောငျးကနဲဖွဈကာ မာလာသညျ။ ဗွုံးကနဲ ကွူကွူမေ လီးတနျကွီးကို လှတျခလြိုကျပွီး လှညျ့ပွနျရနျ တှနျ့သှားပွီးမှ တမြိုးစဉျးစားမိပွီး လီးတနျကွီးကို ဖှဖှလေး ပှတျသပျပေးသညျ။ အေးလှငျ နိုးနပွေီဆိုသညျကိုတော့ ကွူကွူမေ က အတတျသိလိုကျပွီးသား ဖွဈလသေညျ။ ပှတျသပျပေးလိုကျတော့ မတျထောငျ၍ တငျးပွောငျလာသော လီးကွီးက ကွူကွူမေ၏ လကျတကိုငျပငျ မဆနျ့တော့ပေ။ လီးကွီးကို ကွူကွူမေ အားရပါးရ ဖဈြညှဈကွညျ့သညျ။ လီးကွီးက မဖွုံ၊ ပိုပွီးတောငျ မာ၍လာသညျ။
ကွူကွူမေ၏ နောကျ ထပျ လကျတဈဖကျက ထောငျမတျ၍ ကွီးခငျြတိုငျးကွီးနသေော လီးကွီးဆီသို့ လှမျးလိုကျပွနျသညျ။ ပွီးတော့ လီးကွီးကို ပနျး လေးတဈပှငျ့အလား တယုတယ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျသညျ။ လီးကွီးမှ တဒိတျဒိတျသှေးတှေ တိုးနသေညျကို ကွူကွူမေ၏ လကျဖဝါးနုနုလေးမှ ထိတှသေိ့ရှိနရေလသေညျ။ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ယုယုယယလေး လီးတနျကွီးကို ပှတျပေးလိုကျတော့ လီးကွီးက ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ဖွဈလာသညျ။ အေးလှငျ ဒီထကျပိုပွီး ဟနျမဆောငျနိုငျတော့ပေ။ ပကျလကျလှနျ၍ အိပျနရောမှ ငေါကျကနဲထထိုငျလိုကျပွီး ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျ၍နသေော ကွူကွူမေ၏ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကို အတငျးဆှဲ၍ ဖကျလိုကျတော့သညျ။ “ အမေ့…အို…အငျ့…မလုပျနဲ့…လေ…မောငျလေး…အို…အို…” သူ့ပျေါသို့ ခါးညှတျ၍ကလြာသော ကွူကွူမေ အား အေးလှငျက အတငျးကွုံးဖကျပွီး ပါးနှဈဖကျကို ဘယျပွနျညာပွနျ နမျးပဈပွနျသညျ။
“ တျော…တျော…တော့…ကှယျ…” အလနျ့တကွားလသေံဖွငျ့ ပွောနသေော ကွူကွူမေ၏ လကျတဖကျက အေးလှငျ၏ လီးကွီးကို မလှတျ ကိုငျမွဲကိုငျထား သညျ။ ကွူကွူမေ ပွောလိုကျတော့ အေးလှငျက သူမကို ဖကျထားသော လကျနှဈဖကျအား လြှော့ပေးလိုကျသညျနှငျ့ ကွူကွူမေ ခေါငျးလေးမော့၍ ခါးကိုပွနျ၍ အဆနျ့ အေးလှငျ၏ လကျနှဈဖကျက ပွနျ၍ အတငျးဖကျလိုကျပွီး သူမ၏ ဖူးဖူးလုံး လုံး နှုတျခမျးလေးအစုံကို အတငျးဆှဲစုပျကာ နမျးပဈလိုကျသညျ။ “ အု…ဟု…အငျး…” ကွူကွူမေ၏ အသံတှကေ နှုတျဖြားမှ ထှကျမလာဘဲ လညျခြောငျးထဲမှသာ အသံလေးတှေ ထှကျနရေသညျ။ တခဏအ တှငျး ကွူကွူမေ တဈယောကျ အေးလှငျ၏ အနမျးနောကျပါသှားသညျ။
အေးလှငျကို မသိမသာလေး တုနျ့ပွနျနမျးသညျ။ ဒီ တော့ စိတျတှရေဲလာပွီဖွဈသော အေးလှငျ၏ လကျတဈဖကျက တထပျတညျးဝတျထားသော ဂါဝနျအောကျမှ နို့အုံတဈလုံး ပျေါရောကျသှားပွီး ဖွဈညှဈ ဆုပျကိုငျနမေိသညျ။ နှဈယောကျစလုံး ရမကျသှေးတှကေ ငယျထိပျကို ရောကျနကွေပွီဖွဈသညျ။ ကွူကွူမကေ လီးကိုကိုငျထားသညျ့ လကျအားမလှတျဘဲ ကနျြလကျတဈဖကျဖွငျ့ အေးလှငျကို ဖကျလိုကျသညျ။ နို့ကိုငျ နသေော လကျက နို့နှဈလုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံးပွောငျး၍ ဆုပျနယျပေးနသေညျ။ ကွူကွူမေ တဈယောကျ ကုတငျဘေး တှငျ မတျတပျရပျလကျြမှ ဒူးတှမေခိုငျခငျြတော့ပေ။ ပထမဆုံး အေးလှငျကို ဖကျထားသော လကျကို ကွူကွူမကေ လှတျပေး လိုကျသညျ။
ဒုတိယ အေးလှငျ၏ နှုတျခမျးနှဈလှာကွားမှ သူမ၏ နှုတျခမျးကို ပွှတျကနဲ နအေောငျ ဆှဲခှာ၍ ယူလိုကျသညျ။ “ တျောပွီ…မောငျလေး…မမ သှား…တော့မယျ…” စကားလညျးဆုံးရော လီးပျေါမှ လကျကိုဖယျကာ ကွူကွူမေ တဈယောကျ နောကျသို့လှညျ့ပွီး အခနျးထဲမှ ထှကျသှား လတေော့သညျ။ အစတော့ အေးလှငျက သူ၏ အနားမှ ထှကျခှာသှားသော ကွူကွူမေ၏ ကြောပွငျကို နားမလညျနိုငျစှာဖွငျ့ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ နောကျ သူ့မကျြလုံးမြားက တလှုပျလှုပျခါရမျးသှားသော ကွူကွူမေ၏ တငျသားကွီးတှဆေီ ရောကျသှား ပွီး တခကျြမြှပွုံးလိုကျရာမှ အေးလှငျ တဈယောကျ ကုတငျပျေါမှ ခုနျဆငျးလိုကျပွီး ပုဆိုးကို ဖွနျ့ဝတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူ့ ကိုယျပျေါမှ ရှပျအကငြ်္ီကို ခြှတျ၍ ကုတငျပျေါတငျလိုကျပွီး သူ၏ အိပျခနျးအပွငျသို့ ထှကျလိုကျလသေညျ။
အိပျခနျးအပွငျရောကျလို့ ကွူကွူမေ၏ အိပျခနျးဆီလှမျးပွီးကွညျ့လိုကျတော့ ပိတျထားသော အိပျခနျးတံခါးကို တှလေို့ကျ ရသညျနှငျ့ အေးလှငျ မကျြနှာပကျြသှားသညျ။ ဒါပမေယျ့ အေးလှငျ နောကျသို့ မဆုတျပါ။ ပုဆိုးထဲမှ တောငျမတျနဆေဲဖွဈ သော လီးတနျကွီးကို ပုဆိုးပျေါမှ ဆုပျကိုငျလိုကျပွီး လကျကို ခကျြခွငျးလှတျ၍ အေးလှငျ ရှတေို့းလာခဲ့သညျ။ ကွူကွူမေ၏ အိပျခနျးတံခါးရှရေ့ောကျတော့ မဝံ့မရဲစိတျဖွငျ့ အိပျခနျးတံခါးကို လကျဖဝါးဖွငျ့ အသာလေး တှနျးကွညျ့သညျ။ အေးလှငျ မကျြ နှာ ပွုံးယောငျသနျးသှားသညျ။ အိပျခနျးတံခါးက ဖွေးဖွေးလေးဟ၍ သှားသညျ။
အထဲသို့ ဗွုံးကနဲ မဝငျသေးဘဲ တံခါးဟသှားသော နရောမှ နေ၍ အထဲ သို့ ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ကွူကွူမေ တဈယောကျ နှဈယောကျအိပျကုတငျကွီးပျေါတှငျ တစောငျးလေးလှဲ၍ နသေညျ။ တံခါးဖကျကို ကြောပေးထားတော့ စှငျ့ကားသော ကွူကွူမေ၏ တငျသားကွီးတှကေ အေးလှငျ မကျြလုံးထဲတှငျ အထငျးသား မွငျနသေညျ။ နဂိုက ခွသေလုံးလောကျရှိသော ဂါဝနျအောကျနားစက ယခု ဒူးခေါငျးအထကျပေါငျဖြားထိရောကျနတေော့ ဝငျးဝါသော ခွသေလုံးသား လှလှလေးက မီးရောငျအောကျမှ အေးလှငျကို မကျြစပဈပွနသေညျ။ သူ့ဖကျသို့ ကြောပေးတစောငျးလှဲနေ သော ကွူကွူမကေို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ရငျး အေးလှငျ တဈယောကျ ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျးခုနျလာသညျ။
အေးလှငျ၏ ခွတေဈဖကျ က အမှတျတမဲ့ အခနျးထဲသို့ လှမျးလိုကျမိရာမှစ၍ အေးလှငျ တဈယောကျ ဟနသေော တံခါးကို ထပျမံ၍တှနျးဖှငျ့ကာ ကွူကွူမေ၏ အိပျခနျးထဲသို့ ဝငျလာခဲ့လသေညျ။ ကုတငျဘေး ကပျမိတော့ သူ့ခွလှေမျးကိုရပျကာ ကုတငျပျေါမှ ပနျးပုရုပျအ လား အခြိုးအဆဈကနြ၍ ရငျခုနျစရာကောငျးလောကျအောငျ လှနသေော ကွူကွူမေ ကို ငေးစိုကျကွညျ့ရငျး အေးလှငျ ကုတငျပျေါသို့ ဒူးထောကျတကျလိုကျသညျ။ နှဈယောကျအိပျကုတငျကွီးက ငွိမျ့ကနဲ ဖွဈသှားပမေယျ့ ကွူကွူမကေ လှညျ့၍မြှ မကွညျ့ပေ။ အေးလှငျက ကုတငျပျေါ ရောကျသညျနှငျ့ ကွူကွူမေ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ငုံ့၍ဖကျပွီး ပကျလကျဆှဲလှနျသညျ။ ပကျလကျလေးဖွဈသှားသော ကွူကွူမေ က မကျြလုံးအစုံကို မဖှငျ့။ မှိတျထားဆဲဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးတှကေ ဖှငျ့ဟ၍လာသညျ။
“ မောငျလေးလား…မမ အိပျခငျြပွီကှာ…သှားအိပျတော့…” ကွူကွူမေ ပွောလိုကျသော စကားကို လုံးစပေ့တျစေ့ အေးလှငျ ကွားမကွား မသိပါ။ စကားပွောလာသော ကွူကွူမေ၏ နှုတျခမျးအစုံကို ဆှဲစုပျ၍ နမျးပဈရငျး သူမကိုယျလုံးလေးကို ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျထားလိုကျသညျ။ အေးလှငျက နမျးလိုကျ တော့ ကွူကွူမေ၏ တုနျ့ပွနျအနမျးက ခကျြခွငျး တနျပွနျလာသညျ။ အားရပါးရ စုပျနမျးရငျး လကျအစုံက ကွူကွူမေ၏ တကိုယျလုံးကို အနှံ့လြှောကျ၍ ပှတျနသေညျ။ အေးလှငျ သူ့စိတျသူ မထိနျးနိုငျတော့ပေ။ မကျြနှာခငျြးခှာလိုကျပွီး ခါးတဆဈ ခြိုးထိုငျလိုကျကာ ကွူကွူမေ၏ ပုခုံးနှဈဖကျပျေါတှငျ ရှိသော ဂါဝနျသိုငျးကွိုးကို ဘေးတဖကျတခကျြစီရှိ လကျမောငျးမြားဆီ သို့ ဆှဲ၍ခသြညျ။
ကွူကွူမေ၏ မကျြလုံးလေးမြား ပှငျ့လာသညျ။ ညှို့မကျြလုံးကွီးတှနှေငျ့ အေးလှငျကို ကွညျ့သညျ။ “ မောငျလေးရယျ…သူမြားတှေ သိရငျ…မကောငျးပါဘူးကှာ…” ပွောလညျးပွော ဘယျဖကျလကျကို ဆှဲတငျ၍ ဂါဝနျသိုငျးကွိုးတဖကျကို ခြှတျပေးလိုကျသညျ။ “ ဘယျသူသိမှာလဲ မမရာ…မောငျလေးနဲ့ မမ နှဈယောကျထဲရှိတာပဲဟာ…” “ ကြှတျ…ခကျတာဘဲကှာ…” ကွူကွူမေ၏ မကျြလုံးလေးမြား ပွနျ၍မှိတျသှားပွီး ညာဖကျလကျကို ဆှဲတငျ၍ ညာဖကျလကျမောငျးပျေါရှိ ဂါဝနျသိုငျးကွိုး ကို ခြှတျပေးလိုကျပွနျသညျ။ အေးလှငျ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ သူမ၏ ဂါဝနျကို ခါးဆီသို့ဆှဲခလြိုကျတော့ ပေါကျစီအရှယျ နို့လေးနှဈ လုံးက ထငျးကနဲ ပျေါလာရာ အေးလှငျက ငုံ့၍ စို့တော့သညျ။ ကိုယျလုံးလေးကိုလညျး လှုပျကနဲလုပျ၍ ရငျဘတျလေးကို ကော့တငျပေးရငျး သူမ၏ လကျတဖကျက အေးလှငျ၏ ကြောပွငျကွီးပျေါရောကျလာပွီး ဖကျလိုကျသညျ။
နို့စို့ရငျး အေးလှငျ၏ လကျတဈဖကျက သူမ၏ ခန်ဓာကိုယျခါးအောကျပိုငျးတဈခုလုံးကို ပေါငျတနျကွီးတှပေါမကနျြအောငျ ပှတျသပျပေးသညျ။ ထိုသို့ပှတျသပျရငျး ဂါဝနျကိုလညျး ခါးဆီသို့ ဆှဲဆှဲတငျသညျ။ တဈလုံးပွီး တဈလုံး စို့နသေော အေးလှငျ ကွောငျ့ နို့သီးလေးတှေ ထောငျထလာရုံမြှမက နို့အုံဖှေးဖှေးလေးမြားပါ နီရဲလာသညျ။ “ အငျး…အငျး…မောငျလေး…ဟငျး…ဟငျး…” ငွီးသံလေးပွုရငျး ကွူကွူမေ၏ ခေါငျးလေး ဘယျညာခါယမျးသှားသညျ။ အေးလှငျက သူ့မကျြနှာကို ကွူကွူမေ၏ ရငျ ဘတျ ပျေါမှ ဖယျလိုကျသညျ။ အေးလှငျ၏ တရှူးရှူးဖွဈနသေော အသကျရှူသံက အိပျခနျးထဲတှငျ လှမျးမိုး၍နသေညျ။ သူက ကွူကွူမေ၏ အောကျပိုငျးကို ကွညျ့လိုကျတော့ သူဆှဲတငျထားသော ဂါဝနျအောကျနားစက ပေါငျရငျးသို့ ရောကျနပွေီဖွဈ သညျ။
စောကျဖုတျအုံကို မမွငျရသေး။ အေးလှငျ သူမ၏ဘေးတှငျ ဒူးထောကျထိုငျလိုကျပွီး ကွူကွူမေ၏ မကျြနှာကို လှမျး ကွညျ့လိုကျသညျ။ မကျြလုံးနှဈလုံးက မှိတျထားဆဲဖွဈသညျ။ “ မမကွူ…ဒီမှာကွညျ့စမျး…” ကွူကွူမေ မကျြလုံးဖှငျ့၍အကွညျ့ သူက ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျတော့ လီးတနျကွီးက လှုပျရမျး၍ ထှကျပျေါလာသညျ။ “ မမ ကို…ခဈြမယျ့ ဟာကွီးလေ…” “ မငျးကလဲကှာ…ဘာတှေ…ပွောမှနျးမသိဘူး…ဟငျး…” ကွူကွူမေ စကားမပီတော့…လကျက လီးကိုလှမျး၍ ဖှဖှလေး ဆုပျလိုကျသညျ။ လီးကွီးကို မကျမောစှာ ကွညျ့မိနသေော ကွူကွူမေ တှေးမိသညျ။ ကောငျလေးက ငယျသာငယျသညျ သူ့လီးက ဦးဇျောထှနျး လီးထကျပငျ ပိုရှညျပိုတုတျပွီး ပိုကွီးနေ သညျ။ ကွူကွူမေ သဘောကြ ကနြေပျမိသညျ။ တှေးရငျး ကွူကွူမကေ ဂါဝနျကို ဖငျကွှ၍ ခါးဆီသို့ဆှဲတငျပေးပွီး တပါ တညျး ဒူးနှဈလုံးကို ဆှဲ၍ ထောငျလိုကျသညျ။ ထှကျပျေါလာသော စောကျဖုတျကွီးက နညျးတာကွီး မဟုတျ။ အမှေးနကျတှေ ထူထပျစှာ ပေါကျနပွေီး အရမျးကွီးကို ခုံးထနသေညျ။
အေးလှငျ ပုဆိုးကို ခြှတျလိုကျပွီးဖွဈ၍ ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားရသညျ့နညျးတူ ကွူကွူမမှောလညျး ကိုယျပျေါ ရှိ ဂါဝနျပါးလေးမှာ ခါးတှငျသာ စုတငျနပွေီဖွဈ၍ တကိုယျလုံး ဝတျလဈစလဈဖွဈကာ အသားလေးတှကေ ဝငျးဝငျးဝါဝါလေး တှဖွေဈလြှကျ လှခငျြတိုငျး လှနလေသေညျ။ အေးလှငျက ကွူကွူမေ၏ ခွရေငျးဖကျသို့ ရှကေ့ာ ဒူးထောကျနရောယူလိုကျတော့ ကွူကွူမကေ ဒူးနှဈလုံးကို သူမဗိုကျ ပျေါသို့ မတငျကာ ကှေးလိုကျသညျ။ တဈတီတူးမလေးတဈကောငျလို ဖွဈသှားသညျ။ အေးလှငျ ဒူးထောကျနရောယူရငျး ငုံ့ ကွညျ့လိုကျတော့ ဖေါငျးထ ထူအမျးနသေော စောကျပတျနှုတျခမျးကွီးနှဈခုကွားမှ အရညျလေးတှကေ စို့၍ထှကျနသေညျ။ အေးလှငျ လီးကိုတပွေီ့း တဈခါတညျး ဆောငျ့၍ လိုးသှငျးပဈလိုကျသညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…ဒုတျ…အား…အငျး…အတငျးကွီး…ပဲကှယျ…” လီးက တဆုံးဝငျသှားသညျ။ “ မမက လှတော့…စိတျ မထိနျးနိုငျလို့ပါ…” “ ဟှနျး…ခုမှ…” မကျြစောငျးလေးထိုး၍ ပွောရငျး လီးကို စောကျပတျဖွငျ့ တဈခကျြညှဈလိုကျသညျ။
ညှဈအားကောငျး၍ လကျနှငျ့ အတငျး ဆှဲညှဈလိုကျသလို ခံစားလိုကျရပွီး အေးလှငျ၏ စိတျတှကေ ထောငျးကနဲထသှားသညျ။ အေးလှငျ သူ့လကျနှဈဖကျကို ကွူကွူမေ၏ ကှေးတငျထားသောခွထေောကျနှဈဖကျဘေး တဖကျတခကျြဆီမှ ရှသေို့လှမျး၍ နို့အုံနှဈလုံးကို ကိုငျ၍ ဆှဲ သညျ။ ပွီးတော့ နို့သီးလေးတှကေို ခြေ၍ပေးသညျ။ ဒီလိုလုပျရငျး စောကျဖုတျထဲသို့ တဆုံးဝငျနသေော သူ့လီးကွီးကို ဖွေးဖွေးလေး နှဲ့နှဲ့ပေးသညျ။ ခဏအတှငျး စောကျရေ တှကေ ထပျမံ၍ ထှကျလာသညျ။ ပွီးတော့ ကွူကွူမေ တဈယောကျ အသကျကို ဟငျးကနဲ ဟငျးကနဲ ပွငျးထနျစှာ ရှူ၍လာ သညျ။ အေးလှငျက မလိုးသေးဘဲ ထိုနညျးအတိုငျးဆကျ၍ လုပျပေးသညျ။ ကွူကွူမေ အားမလို အားမရဖွဈလာပွီး လီးကွီးကို စောကျဖုတျဖွငျ့ ညှဈညှဈပေးသညျ။ “ ဟငျး…ဟငျး…မောငျလေးရယျ…တျောတော့ကှာ…မမ..မ နေ တတျတော့ဘူး…”
“ ဘာလုပျရမှာလဲ…မမ…လီးကွီးကို ခြှတျလိုကျရမှာလား…ဒါမှမဟုတျ…လိုးရမှာလား…” “ ကြှတျ…မငျး…သိပျပွီး အနိုငျကငျြ့တာပဲ…” “ ဒါဆို…လီးကို ခြှတျလိုကျမယျ…” အေးလှငျက တကယျပငျလီးကို ခြှတျတော့မညျ့ပုံဖွငျ့ စောကျခေါငျးထဲ တဆုံးဝငျနသေော လီးကို ဖွေးဖွေးလေး ဆှဲထုတျ သညျ။ “ အို…မဟုတျဘူး…မဟုတျဘူး…” ကွူကွူမေ ကမနျးကတနျး ပွောသညျ။ “ ဒါဆို…ဘာလုပျရမှာလဲ…မွနျမွနျပွောလေ…လီးက တဝကျထှကျနပွေီ…” “ ကဲ…ဒီလောကျတောငျ ကွားခငျြနေ…လိုးကှာ…လိုး…လိုး…နာနာသာလိုး…” အေးလှငျ ပွုံးလိုကျပွီး အပွငျသို့တဝကျလောကျ ထှကျနသေော သူ့လီးကို တခါထဲ ဆောငျ့၍ လိုးသှငျးလိုကျသညျ။ “ လိုးပွီ…မမ ရေ…လိုးပွီ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဒုတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…” “ ဟငျး…အငျး…အငျ့…အငျ့…” အေးလှငျက ပယျပယျနယျနယျကွီးကို အားရပါးရကွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပဈသညျ။ ကွူကွူမကေလညျး ခါးကို အားပွု၍ အောကျမှနေ၍ ကော့ကော့ပေးသညျ။
“ ဗွဈ…ဇှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဟငျး…ဟငျး…ကောငျးလား…မောငျလေး…” “ သိပျကောငျးတာပဲ မမရာ…မမရော ဟငျ…” “ မငျး…လိုပဲ…” “ ဗွဈ…ဒုတျ…ဖှတျ…ဇှတျ…ပလှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ပွှတျ…” အေးလှငျ ခပျသှကျသှကျကွီးကို ကောငျးကောငျးလိုးနသေညျ။ ကွူကွူမေ၏ လကျတဈဖကျက သူ့နို့တှကေို ကိုငျထား သော အေးလှငျ၏ လကျဖြံတဈဖကျကို လာကိုငျကာ အားမလို အားမရဖွငျ့ ဆုပျညှဈသညျ။ စောကျရညျတှကေ မတရားကွီး ရှဲနဈ၍ ထှကျလာကွသညျ။ “ ဖှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဗွဈ…ဟငျး…မှောကျခလြိုကျ…မမပျေါကို…မှောကျခလြိုကျ…” ကွူကွူမကေ အသဲအသနျပွောရငျး သူမဗိုကျပျေါကှေးတငျထားသော ခွထေောကျနှဈဖကျကို ကားပေးလိုကျသညျ။
အေးလှငျက သူမအပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျတော့ ကွူကွူမေ၏ ခွထေောကျနှဈခြောငျးက အေးလှငျ၏ ခါးကို ညှပျ၍ ခြိတျ တငျလိုကျသညျ။ “ ဖှတျ…ပလှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ…အငျ့…အငျ့…အငျ့…နို့တှစေို့ပေး…အငျး…ဟငျး…အား…” အေးလှငျက နို့တဈလုံးကို ဆှဲစို့လိုကျရငျး အဆကျမပွတျ ကော့၍ လိုးသညျ။ ကွူကွူမေ တဈယောကျ မကျြလုံးမဖှငျ့ တော့ဘဲ တဟငျးဟငျးဖွဈကာ အေးလှငျ၏ ကြောပွငျကွီးကို ဖကျ၍ထားသညျ။ “ ပလှတျ…ဖှတျ…ပွဈ…ပွဈ…ဖှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…ဟငျး…အငျး…အငျး…ဆောငျ့….အား…ဆောငျ့…ဆောငျ့စမျးပါ…နာ နာ ဆောငျ့ စမျး ပါ…မောငျ…ရယျ…အား…ဟား…အငျး…ဟငျး…ဟငျး…” ဒီလောကျဆောငျ့နသေညျ့ကွားမှ ထပျ၍ ဆောငျ့ခိုငျးနပေုံထောကျတော့ ကွူကွူမေ ပွီးခငျြလာပွီ ဖွဈကွောငျး သတိထား မိလိုကျသညျ။
ဒါကွောငျ့ အေးလှငျက အားသှနျ၍ ဆောငျ့ ဆောငျ့ လိုးပဈလိုကျသညျ။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ…ပလှတျ…ဖှတျ…ဗွဈ…ဒုတျ…ဗွဈ…ဖှတျ…ဗွဈ…အား…ဟား…အငျး…ဟငျး…ကောငျးလိုကျတာ… မောငျရယျ…အား…ဟား…ဆောငျ့…ဆောငျ့…အငျ့…အငျ့…ဗွဈ …ဗွဈ…အ…ဟ…သိပျခဈြတယျ…မောငျရယျ…အား…ဟငျး…… ဟငျး…ဗွဈ…ပလှတျ…ပွှတျ…ဗွဈ…အ…အ…ပွီး…ပွီး…မမ…ပွီးတော့မယျ…အ…ရှီး…ပွီး…ပွီး…အား…ဟား…” “ မမ…အား…အငျး…ကောငျးလိုကျတာ…မမ ရာ…အား…ဟ…အား…ဗွဈ…ပွှတျ…ဖှတျ…ဗွဈ…အား…သိပျ…ခဈြတယျ… မမရယျ…အား…အငျး…ဟငျး…ကနြျော လညျး…ပွီး…တော့မယျ… မမ…အငျ့…အငျ့…အငျ့…ဗွဈ…ပွှတျ…ဗွဈ…ဗွဈ…ပွီး…ပွီး… အား…ဟငျး…ဟငျး…”
အေးလှငျက အပျေါက အားရပါးရ ဆောငျ့ပေးသလို ကွူကွူမကေလညျး အောကျမှနေ၍ အားရပါးရ ကော့ကော့ပွီး ပငျ့ဆောငျ့ပေးလိုကျရာ အခကျြ (၅၀)လောကျ တကျညီလကျညီ ဆောငျ့ လိုကျသောအခါတှငျတော့ တဟငျးဟငျး တအီးအီး ငွီးရငျး ကွူကွူမကေ အေးလှငျ၏ လီးတနျကွီးအား စောကျပတျအတှငျးသားမြားဖွငျ့ အားပါးတရဖဈြညှဈရငျး ပွီးသှားသလို အေးလှငျကလညျး ကွူကွူမေ၏ အားကောငျးလှသော စောကျပတျညှဈအားကွောငျ့ မထိနျးနိုငျတော့ပဲ လီးထိပျဖူးကွီးအား ကွူကွူမေ၏ စောကျပတျထဲသို့ ဖိသှငျးထိုးစိုကျ၍ သုတျရညျမြားကို တဗွဈဗွဈ ပနျးထုတျရငျး နှဈယောကျသား ပွိုငျတူပွီးသှား ကွလတေော့သညျ။ နောကျပိုငျးတှငျတော့ အေးလှငျက သူ့အခနျးတှငျ မအိပျတော့ဘဲ ကွူကွူမနှေငျ့အတူ ညစဉျသှား၍ အိပျလသေညျ။ ဦးဇျောထှနျး ရောကျလာသောနမြေ့ားတှငျတော့ အေးလှငျမှာ သူ့အခနျးသူပွနျ၍ အိပျရငျး ခဈြခရီး ဆကျခဲ့လတေော့သညျ ……… ပွီးပါပွီ။
“ အကိုရယ်…ဒီလောက်ကြမ်းရသလား……ဒီလို ဆောင့်ထိုးလိုက်တာ ငယ်ငယ် နာမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား……ဟင်း….ဟင်း…ကျွတ်…ကျွတ်…ကျွတ်……” ငယ်ငယ်က သူ့လက်မောင်းကြီးကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့် ထုထုပြီးပြောသည်။ “ နာတာက ခဏပါကွယ်……နောက်တော့ ကောင်းလာမှာပါ……” ပြောနေရင်း အေးလွင်က ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ အချက် (၂၀) လောက်လိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ ငယ်ငယ် က နာတာတွေကိုမေ့ပြီး မျက်လုံးလေးတွေ မှေးထားရင်းက ကော့ကော့ပေးပါတော့တယ်။ “ ပလွတ်…ဖွတ်…ဒုတ်…အား…ဗြစ်…ဇွတ်…ပလွတ်…ဗြစ်…အင်း…ဟင်း…ဟင်း…” အေးလွင်က နို့သီးလေးတွေကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး စို့လိုက် နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူလိုက်နဲ့ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ ဆောင့်လိုးပေး သည်။ “ ဗြစ်……ဗြစ်……ပလွတ်…ဖွတ်…ပြွတ်……” မကြာခင်မှာပင် ငယ်ငယ်က အရသာတွေ့၍လာသည်။
အရသာတွေ့လာပြီဆိုတော့ ဖြေးဖြေးချင်းလိုးနေသော အေးလွင် ကို အားမရနိုင်ဖြစ်လာသည်။ “ ဗြစ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဖွတ်…ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ…အကိုရယ်…ဆောင့်ပါတော့…နာနာသာ…ဆောင့်ပါ…အ…ဟင်း…ဟင်း…” ငယ်ငယ်က ဒီလိုမချိမဆန့်လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တော့ အေးလွင်က အကြိုက်တွေ့သွားပြီး စိတ်တိုင်းကျဆောင့်လိုးပါ တော့သည်။ “ ပလွတ်…ဒုတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…အား…အင်း…ဖွတ်…ဒုတ်…အား…ဟား…အမလေး…ကိုရယ်…ကျမနို့တွေကိုစို့ပေးပါလား…အင်း…ဟင်း…အား…အင်း…. …ကောင်းလိုက်တာနော်…” ငယ်ငယ်ကလည်း အပေးကောင်း အေးလွင်ကလည်း အလိုးကောင်းနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေကြသည်။ လီးကို ထုတ် လိုက်တိုင်း ငယ်ငယ်၏ စောက်ပတ်လေးက ကပ်ကပ်ပါလာကာ အေးလွင်အရသာတွေ့လှသည်။
ငယ်ငယ်၏ ကိုယ်လုံးလေး က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ဘယ်နေရာကိုင်လိုက် ကိုင်လိုက် မာတင်းနေတော့ ကိုင်ရတာလည်း ကောင်းနေသလို စောက်ပတ် လေးကလည်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတော့ လိုးရတာ ကောင်းလှပြီး အရသာရှိလှသည်။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း အောက်ကနေကော့ကော့ပေးနေတော့ နှစ်ယောက်စလုံး အရသာတွေ့နေရလေသည်။ မကြာခင် မှာပဲ ငယ်ငယ်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေက ရွှဲသထက် ရွှဲလာပြီး များသထက် များလာသည်။ ငယ်ငယ်၏ မျက် နှာလေးက ရှုံ့တွတွလေးဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေက တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ လည်ချောင်းထဲက ဟပ်ကနဲ ဟပ်ကနဲ အသံ လေးတွေ စည်းချက်ကျကျ ထွက်လာတော့ မကြာခင် ငယ်ငယ်ပြီးတော့မည်ကို သိလိုက်သည်။ သူမ တင်မဟုတ် အေးလွင် လည်း ပြီးချင်လာသည်။ “ ပလွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…အား…ကောင်းလိုက်တာ…အကိုရဲ့…အား…အင်း…” ငယ်ငယ့် တကိုယ်လုံး ရမ်းခါပြီး ငြိမ်ကျသွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ အေးလွင်က လီးကို တအားထိုးစိုက်ချလိုက်ပြီး သုတ်ရည်တွေ ကို ပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည်။
ခဏကြာမှိန်းနေပြီးမှ အေးလွင်က ငယ်ငယ် ဘေးကို ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲချလိုက်တော့ ငယ်ငယ်က အေးလွင်ကို အတင်းလှမ်းဖက်လိုက်တော့သည်။ အေးလွင်က ငယ်ငယ့်ကို ပါကင်ဖွင့်လိုက်ရသည်ဆိုသော အသိဖြင့် ကြည်နူးစွာ ပီတိတွေဖြာလျှက် ငယ်ငယ်၏ ကိုယ်လုံး လေးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းကာ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး နမ်းလိုက်တော့သည်။ “ ကောင်းရဲ့လား……ငယ်ငယ်…အားရတယ်နော်…” ငယ်ငယ်က ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေးဖြင့် သူမ မျက်နှာလေးကို အေးလွင်၏ ရင်ခွင်ထဲ ဝှက်၍ ထားလိုက်သည်။ “ ပြောပါ ငယ်ငယ်ရဲ့…အကို လိုးတာ ကောင်းရဲ့လား…ငယ်ငယ် အားရရဲ့လား…” “ ရှက်စရာကြီး အကိုရယ်…ငယ်ငယ် မပြောပါရစေနဲ့…” “ ဟင့်အင်း……ပြောရမယ်…” “ အကိုကလဲ…” “ ပြောလေကွာ…” “ ဟွန်း…ဒီလောက်သိချင်ကြားချင်နေရင်လည်း ပြောပြမယ်…ကောင်းတယ်…သိပ်ကောင်းတယ်…အကို့ လီးကြီးက ငယ်ငယ့် စောက်ပတ်ထဲတင်မဟုတ်ဘူး…အူထဲ အသဲထဲတောင် ဝင်တယ်လို့ထင်ရတယ်…ကိုင်း…ကျေနပ်ပြီလား…” အေးလွင်က ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး ငယ်ငယ်၏ နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်သည်။
ပြီးတော့ သူ့လက်တွေက ငယ်ငယ်၏ နို့နှစ်လုံးကို ဆော့ကစား၍ နေသည်။ အေးလွင်၏ လီးကြီးက တဖြေးဖြေး ပြန်၍မာလာသည်။ “ ငယ်ငယ်…အကို့ လီးကို စုပ်ပေးပါလား…” “ ဟာ…ကြာ…” ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့လေး ပြောရင်းက လီးကြီးကို ငယ်ငယ် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သူမ ကြည့်လိုက်ကာမှ လီးကြီးက ဆတ်ကနဲ အထောင်နှင့်ကြုံသွားသည်။ ငယ်ငယ် ကြက်သီးထသွားသည်။ “ ထကွာ…ငယ်ငယ် ကလဲ…” “ ဟာကြာ…အကို ကလဲ…” မထချင် ထချင် ပုံစံမျိုးလေးနှင့် ငယ်ငယ်က အေးလွင် လှဲနေရာဘေးတွင် ထိုင်လိုက်ပြီး ခြေရင်းမှ သူမ၏ ထဘီကို လှမ်း ဆွဲကာ အေးလွင် လီးကို ပေါင်ခြံတွေပါမကျန်အောင် သုတ်ပေးသည်။ ထိုသို့ ငယ်ငယ်က သုတ်ပေးနေစဉ်တွင် အေးလွင်၏ လက်က ငယ်ငယ်၏ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲပြီး ဆုပ်နယ်ပေးသည်။ နို့သီးနီနီလေးတွေကို ချေပေးသည်။
ငယ်ငယ်ကလည်း လီး ကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး သုတ်ပေးနေတော့ လီးက မာသထက် မာလာလေသည်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ပေကျံနေတာတွေကို သုတ်ပြီးသွားပေမယ့် အိပ်ယာပေါ်မှာ လက်လေးတဖက်ထောက်ထိုင်ပြီး ထောင် ထနေသော လီးကြီးကို စိုက်ပြီးကြည့်နေသည်။ ပြီးမှ တဖြေးဖြေးငုံ့သွားပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပုံဖြင့် ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချ ကာ လီးထိပ်ကြီးကို နမ်းလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်လိုက်သည်။ အေးလွင် ဆတ်ကနဲ ကော့တက်သွားသည်။ ငယ်ငယ်က ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို လက်လေးတဖက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး လီးထိပ်ဖူးကြီးကိုသာ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးနေ သည်။ အေးလွင် အရသာတွေ့ကာ ဇိမ်ရှိနေသည်။ အေးလွင်က ငယ်ငယ့်အား သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းပြီး စုပ် ခိုင်းမယ်ကြံလိုက်ပေမယ့် ငယ်ငယ် လို အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်က ဒီလောက်လုပ်ပေးရင် တော်လောက်ပါပြီဟု သူ့စိတ်ကို သူ ဖြေသိမ့်သည်။
ငယ်ငယ်ကတော့ လီးထိပ်ဖူးကြီးကို စုပ်လိုက် ငုံလိုက် နမ်းလိုက်ဖြင့် စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်နေသည်။ လီးကြီးက အကြော အပြိုင်းပြိုင်းထကာ မာသထက် မာလာရုံမျှမက ထိပ်ဖူးကြီးကလည်း မတရားကြီး ဖေါင်းတင်း၍ ကားလာသည်။ မကြာခင်မှာပဲ အေးလွင် တစ်ယောက် ပြီးချင်စိတ်တွေပေါက်လာသည်။ “ ငယ်ငယ်…အကိုပြီးချင်လာပြီ…တော်တော့ကွာ…” ငယ်ငယ်က ချက်ချင်းလီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် မကျေနပ်ပုံဖြင့် မချင့်မရဲလေး ကြည့်၍ နေ သေးသည်။ “ ငယ်…အပေါ်ကနေလုပ်ပေးပါလား…” “ အကိုကလဲကွာ…ငယ် မှ မလုပ်တတ်တာ…ဟာ” “ ငယ်ကလဲကွာ…အကိုပြောပြမှာပေါ့…အကို့ပေါ်ခွတက်လိုက်ပြီး ဖင်ကိုကြွပြီး…တဖြေးဖြေးသွင်းယူပေါ့…” “ ရှက်စရာကြီး အကိုရယ်…” “ ငယ်ကလဲကွာ…ကို့ကိုမချစ်ဖူးလား…” ငယ်ငယ် မျက်နှာပျက်သွားသည်။ ပြီးမှ… ငယ်ငယ်က ကပျာကသီထပြီး အေးလွင်ကို ခွတက်လိုက်သည်။
သူမ၏ လက်တဖက်က လီးကြီးကို လှမ်း၍ဆုပ်လိုက်ပြီး ဖင်ကြီးကိုကြွကာ လီးထိပ်ကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့၍ တဖြေးဖြေးချင်း ဖင်ကြီးကို ဖိချသည်။ ဒီလောက်လေးပြောလိုက်ရုံဖြင့် ကျကျနနလုပ်တတ်နေသော ငယ်ငယ့်ကို ကျေးဇူးတင် ကျေနပ်နေမိသည်။ ငယ်ငယ်၏ စောက်ခေါင်းထဲကို ဖြေးဖြေးချင်းတိုးဝင်သွားသော လီးကြီး၏ အတွေ့ကြောင့် ငယ်ငယ်၏ စောက်ခေါင်းထဲ တွင်လည်း အရည်တွေရွှဲနစ်နေပြီကို သိလိုက်ရသည်။ လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် ငယ်ငယ်က အေးလွင်၏ ရင်ဘတ်ကြီး ပေါ် လက်နှစ်ဖက်တင်ထောက်ရင်း ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဇွတ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ်…အင်း…ဟင်း…ဟင်း…အ…ကြီး…ကြီးပဲ…ဟင်း…ဗြစ်…ဇွတ်…ဇွတ်…” အစက တစ်ချက်ခြင်းဆောင့်နေသော ငယ်ငယ်၏ ဆောင့်အားက တဖြေးဖြေးမြင့်လာသည်။
ဆောင့်အားက ပြင်းလာ သော်လည်း ဆက်တိုက် သွက်သွက်ကြီးဆောင့်တာမျိုး မဟုတ်ပေ။ အရသာခံကာ တစ်ချက်ခြင်း လေးလေးမှန်မှန် ဆောင့်၍ ငယ်ငယ်က လိုးပေးသည်။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အကြိုက်ခြင်းမတူသော မိန်းမများအား ဘယ်လိုဆောင့်တာကြိုက်သလဲ သိချင် ရင် သူတို့ကို အပေါ်ကတင်ပေးလိုက်လျှင် သူတို့အကြိုက်ဆောင့်တာကို သိရသည် ဟူသော စကားမှန်ကြောင်း အေးလွင် သတိပြုမိလိုက်သည်။ အခု ငယ်ငယ် အပေါ်မှတက်၍ ဆောင့်နေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငယ်ငယ်က ဒရစပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်တာမျိုးကို မကြိုက်။ တစ်ချက်ခြင်း လေးလေးမှန်မှန် ဆောင့်တာကြိုက်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ဇွတ်…ပြွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဇွတ်…” “ အကို…ငယ့် နို့တွေ ဆွဲပေးအုံး…” နို့အကိုင်ခံရင်း အလိုးခံချင်ကြတာ မိန်းမတိုင်း၏ ဆန္ဒပင်ဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်ပြောသည့်အတိုင်း အေးလွင်က သူမ၏ နို့နှစ် လုံးကို စုံကိုင်၍ ဆုပ်နယ်ပေးသည်။
“ ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဟင်း…ကောင်းလိုက်တာ…အကိုရယ်…ဟင်း…ဟင်း…အင်း…” “ ငယ်…ကောင်းလိုက်တာ…ငယ်ရာ…” အေးလွင်ကလည်း ငယ်ငယ် ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အောက်ကနေ၍ သူ့လီးကြီးကို ကော့ကော့တင်ပြီး ပြန်ဆောင့်ပေး သည်။ အပေါ်မှ လိုးရင်းက ငယ်ငယ်က သူ့ဖင်ကြီးကို တချက်တချက် ဇကောဝိုင်း လှည့်လှည့်ပေးသည်။ ကောင်းလွန်းသဖြင့် အေးလွင်က ငယ်ငယ့်ကို ကျေးဇူးတင်မိရုံသာမက ချစ်လည်း ပိုချစ်သွားရသည်။ မကြာခင်မှာပင် အေးလွင်၏ လီးအရင်းက ပူလာပြီး ပြီးချင်လာသဖြင့် အောက်မှနေ၍ အားရပါးရ ကော့ကော့ ဆောင့် လိုက်ပြီး လီးကြီးထိပ်မှ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
“ ဖွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဒုတ်…ဒုတ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…အား…အား…ငယ်…ငယ်…အား…ဟား…အင်း…” မပြီးသေးသော ငယ်ငယ်က မျက်လုံးနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်လုမတတ်ကိုက်ကာ အံကြိတ်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့် ဆောင့်လိုးသည်။ “ ဗြစ်…ပြွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဇွတ်…ဖွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွတ်…ဗြစ်…အား…ဟား…ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ…ကိုရယ်…အား…ဟား…အင့်…ဗြစ်…ပြွတ် …အား…ချစ်…တယ်…ကိုရယ်…ချစ်…ချစ်…အ…အင့်…အင့်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ် …ဗြစ်…အား…ဟား…ရှီး…အင်း…ဟင်း…ဟင်း…” အချက်နှစ်ဆယ်လောက် အပြင်းအထန်ဆောင့်ပြီးတော့ ငယ်ငယ် ခမျာ ‘ဟင်း’ ကနဲဖြစ်ကာ စောက်ပတ်ဝကို လီးအရင်း မှာတိုး၍ ဖိကပ်လိုက်ပြီး အေးလွင်၏ ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ ပုံရက်သားလေး ကျသွားလေသည်။
အေးလွင်ကတော့ ငယ်ငယ်အား ပါကင်ဖွင့်ပွဲတွင် အားရပါးရ လိုးလိုက်ရသဖြင့် အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်ကာ ငယ်ငယ်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဆွဲဖက်လိုက်ပါတော့သည်။ အမှန်တော့ ငယ်ငယ်မှာ အရင်ရည်းစား ထွန်းမောင်နှင့်တုန်းက (၂)နှစ် တောင်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ကလေးပင် ဖျက်ချခဲ့ရသည်ကို ဒီမြို့သို့ပြောင်းလာတာ မကြာသေးသော ထွန်းလွင် တစ်ယောက် မသိရှာ ပါပေ။ အေးလွင် ဒီမော်လမြိုင်မြို့သို့ရောက်တာ (၅)လရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ရောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်း မမကြူကြောင့် ဖြစ်သည်။ အေးလွင်နှင့် ကြူကြူမေတို့က မောင်နှမတွေဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် အရင်းတွေ မဟုတ်ကြပေ။ အေးလွင်၏ ဖခင်နှင့် ကြူကြူမေ၏ မိခင်တို့ မုဆိုးဖိုနှင့် မုဆိုးမ ညားကြတော့ သူတို့နှစ်ယောက် မောင်နှမဖြစ်သွားကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတုန်းက အေးလွင်က (၇)နှစ်သား၊ ကြူကြူမေက (၁၃)နှစ် သမီးဖြစ်သည်။ အခုအေးလွင်က အသက်(၁၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကြူကြူမေက အသက်(၂၄)နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ သူတို့ဇာတိမြို့က ဟင်္သာတမြို့ကဖြစ်သည်။ သူတို့၏ မိခင်ရော ဖခင်ပါ အခုမရှိကြတော့ပေ။ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ကြူကြူမေက ရန်ကုန်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နေပြီး ကြူကြူမေမှာ အတော်လေးလှပသဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးတစ်ယောက်နှင့် ညှိခဲ့သည်။
ထိုအခါ ကြူကြူမေကို အလုပ်မှထွက်ခိုင်းပြီး မော်လမြိုင်မြို့တွင် အိမ်ဝယ်၍ လာထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့တွင်က သူတို့ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံချက်လုပ်ငန်းရှိလေတော့ ဦးဇော်ထွန်းဟုခေါ်သော ကြူကြူမေ၏ လူကြီးက တစ်လတစ်ခါ ရောက်လာလေ့ရှိတတ်လေသည်။ ဦးဇော်ထွန်းက ကြူကြူမေတို့မောင်နှမကို ဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင် ထားပေးသည်။ မော်လမြိုင်မှ အိမ်ကို ဝယ်တာ ပင် ကြူကြူမေ၏ နာမည်နှင့် ဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်ကတော့ ကြူကြူမေထံတွင်ရှိနေသည်။ သူမက အခုမှ အသက်(၂၄)နှစ်ပဲ ရှိသေးသည်။ သွေးသားက အဆူဖြိုးဆုံးအရွယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဇော်ထွန်းက တစ်လမှ တစ်ခေါက် လောက်သာ သူမထံ ရောက်လာသည်။ ရောက်လာတော့လည်း သုံးရက်လောက်ပဲနေပြီး ပြန်သွားသည်။ ဒီတော့ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် သွေးသားဆန္ဒများ အားရကျေနပ်မှုမရှိပေ။ အခုလည်း ည (၁၁)နာရီထိုးနေပြီ။
ကြူကြူမေ အိပ်လို့မပျော်သေး။ ခံရခက်သောဝေဒနာကို တနုံ့နုံ့ခံစားနေရသည်။ မထူး ပါဘူး။ အိပ်မပျော်တဲ့အတူတူ ဝတ္ထုဖတ်ရင်ကောင်းမည်ဟု စဉ်းစားပြီး အိပ်ယာပေါ်မှထ၍ ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုရှာသည်။ မတွေ့။ ည နေက အေးလွင်များ ယူသွားသလား မသိဘူးဟုတွေးမိပြီး အေးလွင် အခန်းထဲသို့ ဝတ္ထုစာအုပ်သွားရှာရန် ထွက်လာခဲ့သည်။ အေးလွင်၏ အိပ်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ အေးလွင်က အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်ကြီး အိပ်ပျော်နေသည်ကို လှမ်း၍ တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကြူကြူမေ အိပ်ခန်းထဲသို့ဆက်၍ ဝင်လာပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ဖြင့် ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုရှာသည်။ “ အို…” ကြူကြူမေ မျက်လုံးလေးများ ဝိုင်းသွားသည်။ အေးလွင်၏ ခေါင်းအုံးဘေးတွင် သူမ၏ စာအုပ်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည် သာမက အေးလွင်၏ခါးမှ ပုဆိုးက ပြေကျ၍ ပစ္စည်းကြီးက အတိုင်းသားပေါ်နေသည်ကိုပါ တွေ့လိုက်ရသည်။
ကြူကြူမေ တစ်ယောက် အေးလွင် အိပ်နေသော ကုတင်ဘေးသို့ တိုးကပ်သွားသည်။ ခေါင်းအုံးဘေးမှ စာအုပ်ကို လှမ်း၍ မယူဖြစ်သေး ဘဲ အေးလွင်၏ ပစ္စည်းကြီးကို ငုံ့၍ ကြည်နေမိသည်။ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်စလုံး မီးမှိတ်၍ မအိပ်တတ်။ အခန်းထဲတွင် နှစ်ပေမီးချောင်းက ထိန်လင်းနေတော့ မြင်ကွင်း တွေ အားလုံးက ရှင်းလင်းနေသည်။ မဲနက်လုံးတစ်နေသော အုကြီးပေါ်တွင် စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးက နည်း နည်းနောနောကြီး မဟုတ်။ သာမန်အနေအထားမှာပင် အသဲယားစရာကြီး ဖြစ်နေလေသည်။ နဂိုကမှ စိတ်တွေထနေသော ကြူကြူမေ တစ်ယောက် သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားကာ အေးလွင်၏ လီးတန်ကြီးကို သူမ၏ လက်လေးတစ်ဖက်နှင့် တုန်တုန် ယင်ယင်လေး အသာမ၍ ကိုင်လိုက်မိသည်။ အမှန်တော့ ကုတင်နားသို့ ကြူကြူမေ တိုးကပ်လာကတည်းက အေးလွင် နိုးနေခဲ့တာဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် မျက်လုံးကို မ ဖွင့်ဘဲ အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုကာ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေ ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ လီးကြီးက ကြူကြူမေ၏ လက်ထဲရောက် သည်နှင့် ထောင်းကနဲ ထောင်းကနဲဖြစ်ကာ မာလာသည်။ ဗြုံးကနဲ ကြူကြူမေ လီးတန်ကြီးကို လွှတ်ချလိုက်ပြီး လှည့်ပြန်ရန် တွန့်သွားပြီးမှ တမျိုးစဉ်းစားမိပြီး လီးတန်ကြီးကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးသည်။ အေးလွင် နိုးနေပြီဆိုသည်ကိုတော့ ကြူကြူမေ က အတတ်သိလိုက်ပြီးသား ဖြစ်လေသည်။ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ မတ်ထောင်၍ တင်းပြောင်လာသော လီးကြီးက ကြူကြူမေ၏ လက်တကိုင်ပင် မဆန့်တော့ပေ။ လီးကြီးကို ကြူကြူမေ အားရပါးရ ဖျစ်ညှစ်ကြည့်သည်။ လီးကြီးက မဖြုံ၊ ပိုပြီးတောင် မာ၍လာသည်။
ကြူကြူမေ၏ နောက် ထပ် လက်တစ်ဖက်က ထောင်မတ်၍ ကြီးချင်တိုင်းကြီးနေသော လီးကြီးဆီသို့ လှမ်းလိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ လီးကြီးကို ပန်း လေးတစ်ပွင့်အလား တယုတယ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်သည်။ လီးကြီးမှ တဒိတ်ဒိတ်သွေးတွေ တိုးနေသည်ကို ကြူကြူမေ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးမှ ထိတွေ့သိရှိနေရလေသည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ယုယုယယလေး လီးတန်ကြီးကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ လီးကြီးက ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖြစ်လာသည်။ အေးလွင် ဒီထက်ပိုပြီး ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပေ။ ပက်လက်လှန်၍ အိပ်နေရာမှ ငေါက်ကနဲထထိုင်လိုက်ပြီး ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်၍နေသော ကြူကြူမေ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အတင်းဆွဲ၍ ဖက်လိုက်တော့သည်။ “ အမေ့…အို…အင့်…မလုပ်နဲ့…လေ…မောင်လေး…အို…အို…” သူ့ပေါ်သို့ ခါးညွှတ်၍ကျလာသော ကြူကြူမေ အား အေးလွင်က အတင်းကြုံးဖက်ပြီး ပါးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းပစ်ပြန်သည်။
“ တော်…တော်…တော့…ကွယ်…” အလန့်တကြားလေသံဖြင့် ပြောနေသော ကြူကြူမေ၏ လက်တဖက်က အေးလွင်၏ လီးကြီးကို မလွှတ် ကိုင်မြဲကိုင်ထား သည်။ ကြူကြူမေ ပြောလိုက်တော့ အေးလွင်က သူမကို ဖက်ထားသော လက်နှစ်ဖက်အား လျှော့ပေးလိုက်သည်နှင့် ကြူကြူမေ ခေါင်းလေးမော့၍ ခါးကိုပြန်၍ အဆန့် အေးလွင်၏ လက်နှစ်ဖက်က ပြန်၍ အတင်းဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏ ဖူးဖူးလုံး လုံး နှုတ်ခမ်းလေးအစုံကို အတင်းဆွဲစုပ်ကာ နမ်းပစ်လိုက်သည်။ “ အု…ဟု…အင်း…” ကြူကြူမေ၏ အသံတွေက နှုတ်ဖျားမှ ထွက်မလာဘဲ လည်ချောင်းထဲမှသာ အသံလေးတွေ ထွက်နေရသည်။ တခဏအ တွင်း ကြူကြူမေ တစ်ယောက် အေးလွင်၏ အနမ်းနောက်ပါသွားသည်။
အေးလွင်ကို မသိမသာလေး တုန့်ပြန်နမ်းသည်။ ဒီ တော့ စိတ်တွေရဲလာပြီဖြစ်သော အေးလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က တထပ်တည်းဝတ်ထားသော ဂါဝန်အောက်မှ နို့အုံတစ်လုံး ပေါ်ရောက်သွားပြီး ဖြစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်နေမိသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ရမက်သွေးတွေက ငယ်ထိပ်ကို ရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ကြူကြူမေက လီးကိုကိုင်ထားသည့် လက်အားမလွှတ်ဘဲ ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အေးလွင်ကို ဖက်လိုက်သည်။ နို့ကိုင် နေသော လက်က နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးပြောင်း၍ ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် ကုတင်ဘေး တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက်မှ ဒူးတွေမခိုင်ချင်တော့ပေ။ ပထမဆုံး အေးလွင်ကို ဖက်ထားသော လက်ကို ကြူကြူမေက လွှတ်ပေး လိုက်သည်။
ဒုတိယ အေးလွင်၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမှ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းကို ပြွတ်ကနဲ နေအောင် ဆွဲခွာ၍ ယူလိုက်သည်။ “ တော်ပြီ…မောင်လေး…မမ သွား…တော့မယ်…” စကားလည်းဆုံးရော လီးပေါ်မှ လက်ကိုဖယ်ကာ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် နောက်သို့လှည့်ပြီး အခန်းထဲမှ ထွက်သွား လေတော့သည်။ အစတော့ အေးလွင်က သူ၏ အနားမှ ထွက်ခွာသွားသော ကြူကြူမေ၏ ကျောပြင်ကို နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် ကြည့်လိုက်မိသည်။ နောက် သူ့မျက်လုံးများက တလှုပ်လှုပ်ခါရမ်းသွားသော ကြူကြူမေ၏ တင်သားကြီးတွေဆီ ရောက်သွား ပြီး တချက်မျှပြုံးလိုက်ရာမှ အေးလွင် တစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဖြန့်ဝတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှ ရှပ်အင်္ကျီကို ချွတ်၍ ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး သူ၏ အိပ်ခန်းအပြင်သို့ ထွက်လိုက်လေသည်။
အိပ်ခန်းအပြင်ရောက်လို့ ကြူကြူမေ၏ အိပ်ခန်းဆီလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ ပိတ်ထားသော အိပ်ခန်းတံခါးကို တွေ့လိုက် ရသည်နှင့် အေးလွင် မျက်နှာပျက်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် အေးလွင် နောက်သို့ မဆုတ်ပါ။ ပုဆိုးထဲမှ တောင်မတ်နေဆဲဖြစ် သော လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး လက်ကို ချက်ခြင်းလွှတ်၍ အေးလွင် ရှေ့တိုးလာခဲ့သည်။ ကြူကြူမေ၏ အိပ်ခန်းတံခါးရှေ့ရောက်တော့ မဝံ့မရဲစိတ်ဖြင့် အိပ်ခန်းတံခါးကို လက်ဖဝါးဖြင့် အသာလေး တွန်းကြည့်သည်။ အေးလွင် မျက် နှာ ပြုံးယောင်သန်းသွားသည်။ အိပ်ခန်းတံခါးက ဖြေးဖြေးလေးဟ၍ သွားသည်။
အထဲသို့ ဗြုံးကနဲ မဝင်သေးဘဲ တံခါးဟသွားသော နေရာမှ နေ၍ အထဲ သို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် တစောင်းလေးလှဲ၍ နေသည်။ တံခါးဖက်ကို ကျောပေးထားတော့ စွင့်ကားသော ကြူကြူမေ၏ တင်သားကြီးတွေက အေးလွင် မျက်လုံးထဲတွင် အထင်းသား မြင်နေသည်။ နဂိုက ခြေသလုံးလောက်ရှိသော ဂါဝန်အောက်နားစက ယခု ဒူးခေါင်းအထက်ပေါင်ဖျားထိရောက်နေတော့ ဝင်းဝါသော ခြေသလုံးသား လှလှလေးက မီးရောင်အောက်မှ အေးလွင်ကို မျက်စပစ်ပြနေသည်။ သူ့ဖက်သို့ ကျောပေးတစောင်းလှဲနေ သော ကြူကြူမေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း အေးလွင် တစ်ယောက် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်။
အေးလွင်၏ ခြေတစ်ဖက် က အမှတ်တမဲ့ အခန်းထဲသို့ လှမ်းလိုက်မိရာမှစ၍ အေးလွင် တစ်ယောက် ဟနေသော တံခါးကို ထပ်မံ၍တွန်းဖွင့်ကာ ကြူကြူမေ၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့လေသည်။ ကုတင်ဘေး ကပ်မိတော့ သူ့ခြေလှမ်းကိုရပ်ကာ ကုတင်ပေါ်မှ ပန်းပုရုပ်အ လား အချိုးအဆစ်ကျန၍ ရင်ခုန်စရာကောင်းလောက်အောင် လှနေသော ကြူကြူမေ ကို ငေးစိုက်ကြည့်ရင်း အေးလွင် ကုတင်ပေါ်သို့ ဒူးထောက်တက်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးက ငြိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားပေမယ့် ကြူကြူမေက လှည့်၍မျှ မကြည့်ပေ။ အေးလွင်က ကုတင်ပေါ် ရောက်သည်နှင့် ကြူကြူမေ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ငုံ့၍ဖက်ပြီး ပက်လက်ဆွဲလှန်သည်။ ပက်လက်လေးဖြစ်သွားသော ကြူကြူမေ က မျက်လုံးအစုံကို မဖွင့်။ မှိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ဖွင့်ဟ၍လာသည်။
“ မောင်လေးလား…မမ အိပ်ချင်ပြီကွာ…သွားအိပ်တော့…” ကြူကြူမေ ပြောလိုက်သော စကားကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ အေးလွင် ကြားမကြား မသိပါ။ စကားပြောလာသော ကြူကြူမေ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဆွဲစုပ်၍ နမ်းပစ်ရင်း သူမကိုယ်လုံးလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားလိုက်သည်။ အေးလွင်က နမ်းလိုက် တော့ ကြူကြူမေ၏ တုန့်ပြန်အနမ်းက ချက်ခြင်း တန်ပြန်လာသည်။ အားရပါးရ စုပ်နမ်းရင်း လက်အစုံက ကြူကြူမေ၏ တကိုယ်လုံးကို အနှံ့လျှောက်၍ ပွတ်နေသည်။ အေးလွင် သူ့စိတ်သူ မထိန်းနိုင်တော့ပေ။ မျက်နှာချင်းခွာလိုက်ပြီး ခါးတဆစ် ချိုးထိုင်လိုက်ကာ ကြူကြူမေ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်တွင် ရှိသော ဂါဝန်သိုင်းကြိုးကို ဘေးတဖက်တချက်စီရှိ လက်မောင်းများဆီ သို့ ဆွဲ၍ချသည်။
ကြူကြူမေ၏ မျက်လုံးလေးများ ပွင့်လာသည်။ ညှို့မျက်လုံးကြီးတွေနှင့် အေးလွင်ကို ကြည့်သည်။ “ မောင်လေးရယ်…သူများတွေ သိရင်…မကောင်းပါဘူးကွာ…” ပြောလည်းပြော ဘယ်ဖက်လက်ကို ဆွဲတင်၍ ဂါဝန်သိုင်းကြိုးတဖက်ကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ “ ဘယ်သူသိမှာလဲ မမရာ…မောင်လေးနဲ့ မမ နှစ်ယောက်ထဲရှိတာပဲဟာ…” “ ကျွတ်…ခက်တာဘဲကွာ…” ကြူကြူမေ၏ မျက်လုံးလေးများ ပြန်၍မှိတ်သွားပြီး ညာဖက်လက်ကို ဆွဲတင်၍ ညာဖက်လက်မောင်းပေါ်ရှိ ဂါဝန်သိုင်းကြိုး ကို ချွတ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ အေးလွင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ ဂါဝန်ကို ခါးဆီသို့ဆွဲချလိုက်တော့ ပေါက်စီအရွယ် နို့လေးနှစ် လုံးက ထင်းကနဲ ပေါ်လာရာ အေးလွင်က ငုံ့၍ စို့တော့သည်။ ကိုယ်လုံးလေးကိုလည်း လှုပ်ကနဲလုပ်၍ ရင်ဘတ်လေးကို ကော့တင်ပေးရင်း သူမ၏ လက်တဖက်က အေးလွင်၏ ကျောပြင်ကြီးပေါ်ရောက်လာပြီး ဖက်လိုက်သည်။
နို့စို့ရင်း အေးလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပေါင်တန်ကြီးတွေပါမကျန်အောင် ပွတ်သပ်ပေးသည်။ ထိုသို့ပွတ်သပ်ရင်း ဂါဝန်ကိုလည်း ခါးဆီသို့ ဆွဲဆွဲတင်သည်။ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စို့နေသော အေးလွင် ကြောင့် နို့သီးလေးတွေ ထောင်ထလာရုံမျှမက နို့အုံဖွေးဖွေးလေးများပါ နီရဲလာသည်။ “ အင်း…အင်း…မောင်လေး…ဟင်း…ဟင်း…” ငြီးသံလေးပြုရင်း ကြူကြူမေ၏ ခေါင်းလေး ဘယ်ညာခါယမ်းသွားသည်။ အေးလွင်က သူ့မျက်နှာကို ကြူကြူမေ၏ ရင် ဘတ် ပေါ်မှ ဖယ်လိုက်သည်။ အေးလွင်၏ တရှူးရှူးဖြစ်နေသော အသက်ရှူသံက အိပ်ခန်းထဲတွင် လွှမ်းမိုး၍နေသည်။ သူက ကြူကြူမေ၏ အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ သူဆွဲတင်ထားသော ဂါဝန်အောက်နားစက ပေါင်ရင်းသို့ ရောက်နေပြီဖြစ် သည်။
စောက်ဖုတ်အုံကို မမြင်ရသေး။ အေးလွင် သူမ၏ဘေးတွင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး ကြူကြူမေ၏ မျက်နှာကို လှမ်း ကြည့်လိုက်သည်။ မျက်လုံးနှစ်လုံးက မှိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ “ မမကြူ…ဒီမှာကြည့်စမ်း…” ကြူကြူမေ မျက်လုံးဖွင့်၍အကြည့် သူက ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့ လီးတန်ကြီးက လှုပ်ရမ်း၍ ထွက်ပေါ်လာသည်။ “ မမ ကို…ချစ်မယ့် ဟာကြီးလေ…” “ မင်းကလဲကွာ…ဘာတွေ…ပြောမှန်းမသိဘူး…ဟင်း…” ကြူကြူမေ စကားမပီတော့…လက်က လီးကိုလှမ်း၍ ဖွဖွလေး ဆုပ်လိုက်သည်။ လီးကြီးကို မက်မောစွာ ကြည့်မိနေသော ကြူကြူမေ တွေးမိသည်။ ကောင်လေးက ငယ်သာငယ်သည် သူ့လီးက ဦးဇော်ထွန်း လီးထက်ပင် ပိုရှည်ပိုတုတ်ပြီး ပိုကြီးနေ သည်။ ကြူကြူမေ သဘောကျ ကျေနပ်မိသည်။ တွေးရင်း ကြူကြူမေက ဂါဝန်ကို ဖင်ကြွ၍ ခါးဆီသို့ဆွဲတင်ပေးပြီး တပါ တည်း ဒူးနှစ်လုံးကို ဆွဲ၍ ထောင်လိုက်သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော စောက်ဖုတ်ကြီးက နည်းတာကြီး မဟုတ်။ အမွှေးနက်တွေ ထူထပ်စွာ ပေါက်နေပြီး အရမ်းကြီးကို ခုံးထနေသည်။
အေးလွင် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားရသည့်နည်းတူ ကြူကြူမေမှာလည်း ကိုယ်ပေါ် ရှိ ဂါဝန်ပါးလေးမှာ ခါးတွင်သာ စုတင်နေပြီဖြစ်၍ တကိုယ်လုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်ကာ အသားလေးတွေက ဝင်းဝင်းဝါဝါလေး တွေဖြစ်လျှက် လှချင်တိုင်း လှနေလေသည်။ အေးလွင်က ကြူကြူမေ၏ ခြေရင်းဖက်သို့ ရွှေ့ကာ ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်တော့ ကြူကြူမေက ဒူးနှစ်လုံးကို သူမဗိုက် ပေါ်သို့ မတင်ကာ ကွေးလိုက်သည်။ တစ်တီတူးမလေးတစ်ကောင်လို ဖြစ်သွားသည်။ အေးလွင် ဒူးထောက်နေရာယူရင်း ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖေါင်းထ ထူအမ်းနေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းကြီးနှစ်ခုကြားမှ အရည်လေးတွေက စို့၍ထွက်နေသည်။ အေးလွင် လီးကိုတေ့ပြီး တစ်ခါတည်း ဆောင့်၍ လိုးသွင်းပစ်လိုက်သည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ဒုတ်…အား…အင်း…အတင်းကြီး…ပဲကွယ်…” လီးက တဆုံးဝင်သွားသည်။ “ မမက လှတော့…စိတ် မထိန်းနိုင်လို့ပါ…” “ ဟွန်း…ခုမှ…” မျက်စောင်းလေးထိုး၍ ပြောရင်း လီးကို စောက်ပတ်ဖြင့် တစ်ချက်ညှစ်လိုက်သည်။
ညှစ်အားကောင်း၍ လက်နှင့် အတင်း ဆွဲညှစ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရပြီး အေးလွင်၏ စိတ်တွေက ထောင်းကနဲထသွားသည်။ အေးလွင် သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ကြူကြူမေ၏ ကွေးတင်ထားသောခြေထောက်နှစ်ဖက်ဘေး တဖက်တချက်ဆီမှ ရှေ့သို့လှမ်း၍ နို့အုံနှစ်လုံးကို ကိုင်၍ ဆွဲ သည်။ ပြီးတော့ နို့သီးလေးတွေကို ချေ၍ပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တဆုံးဝင်နေသော သူ့လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးလေး နှဲ့နှဲ့ပေးသည်။ ခဏအတွင်း စောက်ရေ တွေက ထပ်မံ၍ ထွက်လာသည်။ ပြီးတော့ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် အသက်ကို ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ ပြင်းထန်စွာ ရှူ၍လာ သည်။ အေးလွင်က မလိုးသေးဘဲ ထိုနည်းအတိုင်းဆက်၍ လုပ်ပေးသည်။ ကြူကြူမေ အားမလို အားမရဖြစ်လာပြီး လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ဖြင့် ညှစ်ညှစ်ပေးသည်။ “ ဟင်း…ဟင်း…မောင်လေးရယ်…တော်တော့ကွာ…မမ..မ နေ တတ်တော့ဘူး…”
“ ဘာလုပ်ရမှာလဲ…မမ…လီးကြီးကို ချွတ်လိုက်ရမှာလား…ဒါမှမဟုတ်…လိုးရမှာလား…” “ ကျွတ်…မင်း…သိပ်ပြီး အနိုင်ကျင့်တာပဲ…” “ ဒါဆို…လီးကို ချွတ်လိုက်မယ်…” အေးလွင်က တကယ်ပင်လီးကို ချွတ်တော့မည့်ပုံဖြင့် စောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးဝင်နေသော လီးကို ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ် သည်။ “ အို…မဟုတ်ဘူး…မဟုတ်ဘူး…” ကြူကြူမေ ကမန်းကတန်း ပြောသည်။ “ ဒါဆို…ဘာလုပ်ရမှာလဲ…မြန်မြန်ပြောလေ…လီးက တဝက်ထွက်နေပြီ…” “ ကဲ…ဒီလောက်တောင် ကြားချင်နေ…လိုးကွာ…လိုး…လိုး…နာနာသာလိုး…” အေးလွင် ပြုံးလိုက်ပြီး အပြင်သို့တဝက်လောက် ထွက်နေသော သူ့လီးကို တခါထဲ ဆောင့်၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ လိုးပြီ…မမ ရေ…လိုးပြီ…ဗြစ်…ဖွတ်…ဒုတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…” “ ဟင်း…အင်း…အင့်…အင့်…” အေးလွင်က ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးကို အားရပါးရကြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပစ်သည်။ ကြူကြူမေကလည်း ခါးကို အားပြု၍ အောက်မှနေ၍ ကော့ကော့ပေးသည်။
“ ဗြစ်…ဇွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဟင်း…ဟင်း…ကောင်းလား…မောင်လေး…” “ သိပ်ကောင်းတာပဲ မမရာ…မမရော ဟင်…” “ မင်း…လိုပဲ…” “ ဗြစ်…ဒုတ်…ဖွတ်…ဇွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ပြွတ်…” အေးလွင် ခပ်သွက်သွက်ကြီးကို ကောင်းကောင်းလိုးနေသည်။ ကြူကြူမေ၏ လက်တစ်ဖက်က သူ့နို့တွေကို ကိုင်ထား သော အေးလွင်၏ လက်ဖျံတစ်ဖက်ကို လာကိုင်ကာ အားမလို အားမရဖြင့် ဆုပ်ညှစ်သည်။ စောက်ရည်တွေက မတရားကြီး ရွှဲနစ်၍ ထွက်လာကြသည်။ “ ဖွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ဟင်း…မှောက်ချလိုက်…မမပေါ်ကို…မှောက်ချလိုက်…” ကြူကြူမေက အသဲအသန်ပြောရင်း သူမဗိုက်ပေါ်ကွေးတင်ထားသော ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးလိုက်သည်။
အေးလွင်က သူမအပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်တော့ ကြူကြူမေ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက အေးလွင်၏ ခါးကို ညှပ်၍ ချိတ် တင်လိုက်သည်။ “ ဖွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…အင့်…အင့်…အင့်…နို့တွေစို့ပေး…အင်း…ဟင်း…အား…” အေးလွင်က နို့တစ်လုံးကို ဆွဲစို့လိုက်ရင်း အဆက်မပြတ် ကော့၍ လိုးသည်။ ကြူကြူမေ တစ်ယောက် မျက်လုံးမဖွင့် တော့ဘဲ တဟင်းဟင်းဖြစ်ကာ အေးလွင်၏ ကျောပြင်ကြီးကို ဖက်၍ထားသည်။ “ ပလွတ်…ဖွတ်…ပြစ်…ပြစ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ဟင်း…အင်း…အင်း…ဆောင့်….အား…ဆောင့်…ဆောင့်စမ်းပါ…နာ နာ ဆောင့် စမ်း ပါ…မောင်…ရယ်…အား…ဟား…အင်း…ဟင်း…ဟင်း…” ဒီလောက်ဆောင့်နေသည့်ကြားမှ ထပ်၍ ဆောင့်ခိုင်းနေပုံထောက်တော့ ကြူကြူမေ ပြီးချင်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိထား မိလိုက်သည်။
ဒါကြောင့် အေးလွင်က အားသွန်၍ ဆောင့် ဆောင့် လိုးပစ်လိုက်သည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဗြစ်…ဒုတ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဗြစ်…အား…ဟား…အင်း…ဟင်း…ကောင်းလိုက်တာ… မောင်ရယ်…အား…ဟား…ဆောင့်…ဆောင့်…အင့်…အင့်…ဗြစ် …ဗြစ်…အ…ဟ…သိပ်ချစ်တယ်…မောင်ရယ်…အား…ဟင်း…… ဟင်း…ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်…ဗြစ်…အ…အ…ပြီး…ပြီး…မမ…ပြီးတော့မယ်…အ…ရှီး…ပြီး…ပြီး…အား…ဟား…” “ မမ…အား…အင်း…ကောင်းလိုက်တာ…မမ ရာ…အား…ဟ…အား…ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွတ်…ဗြစ်…အား…သိပ်…ချစ်တယ်… မမရယ်…အား…အင်း…ဟင်း…ကျနော် လည်း…ပြီး…တော့မယ်… မမ…အင့်…အင့်…အင့်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ပြီး…ပြီး… အား…ဟင်း…ဟင်း…”
အေးလွင်က အပေါ်က အားရပါးရ ဆောင့်ပေးသလို ကြူကြူမေကလည်း အောက်မှနေ၍ အားရပါးရ ကော့ကော့ပြီး ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ အချက် (၅၀)လောက် တက်ညီလက်ညီ ဆောင့် လိုက်သောအခါတွင်တော့ တဟင်းဟင်း တအီးအီး ငြီးရင်း ကြူကြူမေက အေးလွင်၏ လီးတန်ကြီးအား စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် အားပါးတရဖျစ်ညှစ်ရင်း ပြီးသွားသလို အေးလွင်ကလည်း ကြူကြူမေ၏ အားကောင်းလှသော စောက်ပတ်ညှစ်အားကြောင့် မထိန်းနိုင်တော့ပဲ လီးထိပ်ဖူးကြီးအား ကြူကြူမေ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဖိသွင်းထိုးစိုက်၍ သုတ်ရည်များကို တဗြစ်ဗြစ် ပန်းထုတ်ရင်း နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူပြီးသွား ကြလေတော့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ အေးလွင်က သူ့အခန်းတွင် မအိပ်တော့ဘဲ ကြူကြူမေနှင့်အတူ ညစဉ်သွား၍ အိပ်လေသည်။ ဦးဇော်ထွန်း ရောက်လာသောနေ့များတွင်တော့ အေးလွင်မှာ သူ့အခန်းသူပြန်၍ အိပ်ရင်း ချစ်ခရီး ဆက်ခဲ့လေတော့သည် ……… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မိထှေးရဲ့သမီး